ဂဇက် တံခါးစောင့်ကြီး (4/12) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanmar Gazette » ဂဇက် တံခါးစောင့်ကြီး (4/12)
ဂဇက် တံခါးစောင့်ကြီး (4/12)
Posted by black chaw on Dec 27, 2011 in Myanmar Gazette, Opinions & Discussion | 40 comments
အပိုင္း ၄ - ဒီဇင္ဘာ တံခါးေစာင့္ႀကီး။
တံခါးစောင့်ကြီး အလုပ်မဆင်းနိုင်တာ ၁ ပတ်လောက်ရှိသွားတာ ခွင့်လွှတ်ကြပါဗျာ။
တူးတဲ့ ဆွတဲ့ အလုပ်တွေပဲလုပ်နေရင်း ကိုယ်တိုင်လည်း ရေးချင်တာတွေ များနေတဲ့အခါ
အင်မတန်စိတ်ပင်ပန်းရပါတယ်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ကတော့ ကုန်လုဆဲဆဲပေါ့ဗျာ။
အင်ဇာဂီလေးပြောသလို ဒီနှစ်ထဲ စာရေးနည်းသွားတော့မယ်ဆိုတာ ကျွန်တော့်ပြောသလိုဖြစ်နေပါပြီဗျာ။
တတ်နိုင်သလောက် အားထုတ်ထားတာလေး တင်ဖြစ်ပါတယ်။
Lulinmg ရဲ့ ပန်းလေး ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးကတော့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ပါဗျာ။ ရှားရှားပါးပါး ကွန်းမန့်လေးတစ်ခုပဲ ရခဲ့ပြီး အဲဒီကွန်းမန့် တစ်ခုကိုလည်း သူကိုယ်တိုင်ပဲပြန်ပေးခဲ့တာပါ။ သူ့ကွန်းမန့်လေးကို ဖတ်ကြည့်ပါဗျာ။
ချစ်သူကတော့ ဖတ်ဖြစ်မဖြစ် မသိပါဘူး။ ဘလက်ကတော့ မဖြစ်မနေဖတ်ရတဲ့လူဆိုတော့ ဖတ်လိုက်ရပါပြီ။ ချစ်သူကို ပန်းလေး နဲ့ တင်စားထားတဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါကြောင်း။
ကြောင်လတ်ရဲ့ ကြက်မတစ်ကောင်ရဲ့ ခံစားချက် (၁-၂-၃) ကတော့ ပြည်တွင်းလူကုန်ကူးမှု အကြောင်း မိန်းခလေးတစ်ယောက်က ပြန်ပြောပြနေတဲ့ ဟန်နဲ့ ရေးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ ကြက်မ ဆိုတာ ကတော့ မကောင်းတဲ့ မိန်းမကို တင်စားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကြောင်လတ်ရဲ့ မူရင်းစာသားတစ်ချို့ကို ဖတ်ကြည့်ကြပါ။
ကျမနဲ့ အတူတူနေတဲ့သူတွေထဲမှာ အရင် က ဇ ရှိတဲ့သူနှစ်ယောက်လည်း ဟိုဝါရင့်တစ်ယောက်နဲ့ပေါင်း မိသွား ပြီး ရှူရှူး ပေါက်တဲ့ကြက် ဖြစ်သွားတယ်။
အမတို့နိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေဟာ အမတို့လို နင်းပြားလူတန်းစား
မိန်းကလေးတွေအတွက်တော့ ဒီအလုပ်ဟာ အကောင်းဆုံး
စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းပါလို့ ရှင်းပြပါတယ်။ အားကိုးစရာ ရွေးချယ်စရာ မရှိတဲ့
ကျမ စိတ်ထဲမှာ သူပြောတာ ဟုတ်သလိုလိုလက်ခံချင်သလိုတောင်ဖြစ်လာပါတယ်။
ကြောင်လတ်ရဲ့ အရေးအသားကလည်း ဆရာကြီး မောင်သာရ ကိုတောင် သတိရမိစေပါကြောင်း နဲ့ ဇာတ်သိမ်း က ကြက်မလေးရဲ့ အသည်းကွဲခန်းလေးကလည်း ကိုယ်တွေ့လို့ထင်ရလောက်အောင် ပြောင်မြောက်လှပါကြောင်း လက်တို့လိုက်ပါရစေခင်ဗျာ။
kotun winlatt ရဲ့ ဆောင်းမိုး ဆိုတာလေးကတော့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ပါဗျာ။ ဖတ်ကြည့်ကြပါ။
ဆောင်းမိုးစွေစွေ နှင်းမှုန်ဝေတို့ကျဆုံးလို့ အလွမ်းဆောင် မိုး ငြိုးမာန်ဖွဲ့ မိုး အေးစက်စက် တိမ်ညိုတွေက ဆွေးစိမ့်မှုတွေကို သယ်ယူလာလေရဲ့ …. ဒုက္ခယန္တရားဆန်ဆန် မိုး နှင်းတွေအစား နေရာယူလေသော မိုး အချိန်အခါမဟုတ်သော မိုး အခါလွန်ရွာသော မိုး ဆောင်းမိုးရဲ့ဖြစ်စဉ် ဆောင်းမိုးရဲ့ သဘာဝထဲမှာ ထုံကျင်အေးစက်နေရပြီ … ကျေးလက်ရဲ့ ဘာသာဘာဝ အလှတရား လှုပ်ရှားမှုတွေကို ငြိမ်သက်သွားစေသော မိုး ပြာလဲ့လဲ့ ကောင်းကင်ကို ရီဝေစေသော မိုး အကြောင်းအကျိုးမဲ့သော မိုး ကိုယ့်ရာသီမဟုတ်ပဲ လာသော မိုး နွေ ၊ မိုး ၊ ဆောင်း ဥတုသုံးမျိုးထဲက ဖောက်ခွင်အဖြစ် စွေသော ချွေသော မိုး သူ့ရဲ့ဖျားယောင်းမှုနောက်ကွယ်က သံစဉ်မဲ့ ဂီတမဆန်သော ရေစက်ရေမှုန်အောက်မှာ လွင့်မျောဖြစ်အောင် မာယာဆန်ဆန်လှည့်စားလေပြီ … ဖောက်လွဲဖောက်ပြန် သဘာဝတရားတွေထဲက ဒဏ်ခတ်မှု တစ်ခုဖြစ်ရင်ဖြစ်လိမ့်မပေါ့ ဒါပေမယ့် … နှင်းတွေရဲ့ ဇာတ်သိမ်းတော့ မဟုတ်လောက်သေးပါဘူး … ရွာနိုင်သလောက်ရွာပြီးရင် နင် ပြန်သွားပါ … ဆောင်းမိုး အလင်္ကာရှည်တွေကို ဘယ်သူကမှ ဖွဲ့ဆိုသီကျူးကြမှာ မဟုတ်လို့ပါ … နင့်ရဲ့ အပြန်လမ်းကို နှင်းရည် နှင်းစက်တို့က မနက်ခင်းအလှတွေသယ်လာပြီး နှုတ်ဆက်ကြမှာမို့ မြန်မြန်ပြန်ပါ အလွမ်းဆောင် မိုး ငြိုးမာန်ဖွဲ့ မိုး အခါလွန် မိုး ရေ ….
ကိုဖက်တီး ရဲ့ ဗေဒင်တတ်ရင်ဟောပေးပါ ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးကတော့ အဆန်းဗျ။ လက္ခဏာ ပုံစံနဲ့ ဇာတာပုံလေးတွေ ဖေါ်ပြပေးထားပြီး နားလည်သူများမှ ဟောကြားပေးပါရန် ဆိုပြီး ဗေဒင်မေးထားတာပါဗျာ။ ရွာသူရွာသားတွေကလည်း ခေသူတွေမှ မဟုတ်တာဗျာ။ တစ်ယောက်တစ်မျိုး ဝိုင်းဟောပေးလိုက်ကြတာ တစ်ယောက်ယောက်ဟောတာတော့ မှန်သွားမှာ သေချာတယ်ဗျ။ ဟုတ်လား ကိုဖက်တီးရေ။
ကိုနေဝန်းနီ ရဲ့ Zoology လက်တွေ့ခန်းထဲရောက်သွားတဲ့ နှလုံးသားတစ်စုံ ကတော့ အောက်မှာ ပါတဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ပါဗျာ။ ကိုယ်တိုင်ဖတ်ပြီးသာ ခံစားကြည့်ကြပါဗျာ။
သူမ, မသိအောင် စာလွှာရေးခဲ့ရ
manawphyulay ရဲ့ ဖတ်ခဲ့မိသော စာအုပ်တစ်အုပ်အကြောင်းကတော့ စာအုပ်အညွှန်းလေးတစ်ခုပါဗျာ။ ဆရာကြီး ဆင်ဖြူကျွန်းအောင်သိန်း ရဲ့ နေမင်းတစ်ထောင် ဆိုတဲ့ စီးရီးလိုက် ဝတ္ထုတွဲကြီးကို ညွှန်းထားတာပါ။ ဝယ်ဖတ်ဘို့ အင်မတန်ခက်ပါတယ်။ ဘလက်မှာတောင် ပထမ တစ်အုပ်ရှိပါတယ်။ သို့သော် အတွဲလိုက်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ စာအုပ် ဆုံးမှ သိလို့ စာအုပ်ဆိုင်ကို သွားမေးတော့မှာ သိုင်းဝတ္ထုများလို အတွဲကြီးနဲ့ တဲ့ခင်ဗျာ။ အဲဒါနဲ့ပဲ ဘလက်လည်း ဆက်လက်ဖတ်ရှုဘို့ကို အားလျှော့ထားလိုက်တော့တယ်ခင်ဗျာ။ ညွှန်း ပေးတာ ကျေးဇူးပါဗျာ။
မောင်ဘလှိုင် ရဲ့ အခြေအနေမဲ့ သန်းကြွယ်သူဌေး အပိုင်း (၅၆) ကတော့ အခန်းဆက် ပို့စ်လေးဖြစ်တဲ့အတွက် စောင့်ဖတ်နေကြသူများ ဖတ်ကြဘို့ပါဗျာ။
kotun winlatt ရဲ့ နည်းနည်းပြောမယ် ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးကိုတော့ ကျွန်တော်အခုမှ ဖတ်မိတာပါ။ အကြိုက်တွေ့မိတယ်လို့ ဝန်ခံပါရစေခင်ဗျာ။ လတ်တလော နားညီးလောက်အောင် ကျွေးကျော်နေတဲ့ ဆင်းရဲမွဲတေမှု လျှော့ချရေး ဆိုသည့် အသံကြီးနှင့် ပတ်သက်၍ တောမှာနေသူ တစ်ဦး၏ ဖီလင်ကို ရေးပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လက်ခုတ်တီးပါတယ် ကိုထွန်းဝင်းလတ် ခင်ဗျာ။ နည်းနည်းလေး နမူနာ ထုတ်နှုတ်ပြပါရစေခင်ဗျာ။
ထိုသို့ အကြောက်တရားများဖြင့်ကြီးပြင်းလာရသော ကျနော်တို့ ဘွဲ့တွေရပြီး နိုင်ငံအကျိုး သယ်ပိုးရန် ဝန်းထမ်း လုပ်ကြသော အခါရော အထက်လူကြီးက မည်သို့အုပ်ချုပ်ပါသနည်း။ ဒီလိုတွေ သံသရာလည်ကာ အကြောက်တရားများ နှင့် တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် ကြောက်ကန်ကန်နေကြသဖြင့် ကျနော်တို့လူမျိုးတွေ ဆင်းရဲမွဲတေနေရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ပညာတတ်သူတွေရော ပညာမဲ့သူတွေပါ အကြောက်တရားများနှင့်ကျင်လည် နေရကာ မကြောက်သင့်သော ကြောက်သင့်တော့တွေးတောမှုသိပ်မရှိတော့ပဲ အကုန်လုံး ရောထွေးကာ ကြောက်ရွံ့နေကြပါတော့သည်။ အဘယ်ကြောင့် ဤသို့ဖြစ်ရပါသနည်း။ တွေးခေါ်မြော်မြင်စဉ်းစားဆင်ခြင် မှုမပြုနိုင်ခြင်း နှင့် နိုင်ထက်စီးနင်း ပြုခံရမှုများခြင်း ကြောင့်သာဖြစ်ပေသည်။
ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ကြည့်ကြဘို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါသည် ခင်ဗျာ။
ကိုရင်စည်သူ ရဲ့ ကျွန်ုပ်၏ ဗေဒင်ဟောစာတမ်း ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးကို အခုမှ ကျွန်တော် ဖတ်ကြည့်မိပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်နေ့က ကိုရင့် မွေးနေ့တဲ့ ခင်ဗျာ။ မွေးနေ့ဆုတောင်းလေးတောင် မလုပ်လိုက်မိတာ ခွင့်လွှတ်ပါ ကိုရင်ရယ်။ ကျွန်တော်က ပို့စ်ရှည်ရှည်ကြီးတွေဆို တံခါးစောင့်ရင်းနဲ့ မှ ပြန်ဖတ်မယ်ဆိုပြီး တေးတေး ထားလိုက်တာ အဲဒါလေးလွတ် သွားပါတယ်ဗျာ။ ကိုရင်က ရွာသူားတွေကို အမှတ်တရ ဟောစာတမ်းလေး ရေးပေးထားပါတယ်။
ချစ်ခင်ရတဲ့ ရွာသူားအားလုံးကို ကျွန်တော့်မွေးလ ဒီဇင်ဘာလဖြစ်တဲ့ ဒီတစ်လကို ကျွန်တော် တတ်ထားတဲ့ ဗေဒင်ပညာကလေးဖြင့် ကြိုးစား တွက်ချက်ပြီး မွေးနေ့ အကြိုကျွေးမွေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ။ နေ့သားအလိုက် ယတြာတွေကို ယုံယုံကြည်ကြည် လုပ်ကြရင်း ဒီဇင်ဘာလ အေးချမ်းတဲ့ ဆောင်းရာသီလေးကို ကျွန်တော်တို့ အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာ ဖြတ်ကျော်ကြရအောင်လားဗျာ။
ကဲ ကိုရင်စည်သူ ရဲ့ မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်ဟောစာတမ်းလေးတွေ ဖတ်ပြီး ဆုလေးတွေ တောင်းပေးလိုက်ကြပါဗျို့။ ကိုရင် တကယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ ပေါင်းဖက်နိုင်ပါစေဗျာ။ တကယ်ချစ်တဲ့သူကလေးက ……..။။။။။။။……..လေးပဲမဟုတ်လား ဗျာ။
super ရဲ့ အသက်တစ်ရာမနေရ အမှုတစ်ရာပွေရ ဆိုတာလေးက တော်တော် ဖတ်လို့ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ သူငယ်ချင်းကောင်မလေးတစ်ယောက်က ပြောပြတာလေးကို ပြန်ရေးပြထားတာပါ။ ကောင်မလေးအဖေရဲ့သူငယ်ချင်း အိမ်ကိုလာလည်ရင်း ပစ္စည်းတစ်ခုအပ်သွားတာမှာ ခိုးရာပါပစ္စည်းဖြစ်နေပါသတဲ့။ ခိုးမှုနဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ပေမယ့် အဖမ်းခံလိုက်ရပြီး ရဲတွေရဲ့ ဒုက္ခပေးတာ ခံရတာလေးကို သနားစဖွယ် ပြန်ပြောပြထားတာပါ။ ဖတ်ပြီး ဘာပြောရမှန်း သိတော့ပါဘူးဗျာ။ ဘီလူးကြီးရဲ့ ကွန်းမန့်လေးကို ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
ဥပဒေအကြံပေးက ဘယ်ပုဒ်မနဲ့ တရားစွဲဆိုသင့်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ပါတယ်
ဒီအခါမှာ ရဲဟာတရားစွဲသူသက်သေ သာသာပဲရှိပါတော့တယ်
တရားရုံးမှာသာ အပြစ်မရှိကြောင်းထုခြေလျှောက်လဲရမှာပါ တရားရုံးနဲ့သာဆိုင်ပါတယ်
တစ်ခုပြောခြင်တာက မြန်မာပြည်က ဥပဒေမှာ
““ ရဲထံထွက်ဆိုချက်ဟာ သက်သေခံမဝင်ပါဘူး””
ရဲထံထွက်ဆိုချက် အဲဒီအချက်ဟာ တရားစီရင်ရေတည့်မတ်ဖြောင့်မှန်စေဘို့ တရားသူကြီးအနေနဲ့
ရဲတွေကိုကြွေးရတယ်ဆိုတော့ ဖြဲစား ဟောက်စား ခြောက်စား
““မရရင်ရစ် ရစ်လို့မရရင်ရန်လုပ် ရန်လုပ်လို့မှမရရင် ရတာယူပြီးပြန်တဲ့”” စောက်ကျင့်မကောင်း
အစိုးရရှေ့နေ ဆွဲချ ကိုတစ်ခါပေး
အမှုဖြစ်လို့ကတော့ ဘာပြောကောင်းမလဲ ဘာမှကိုပြောမကောင်းဘူးဖြစ်သွားမယ်
စိတ်မကောင်းစရာ ဇာတ်လမ်းလေးကို ကိုယ်တိုင်ဖတ်ကြည့်ပြီး ဆဲသင့်တဲ့လူကို ဆဲနိုင်ကြဘို့ သတင်းပေးပါတယ်ဗျာ။
ခင်လတ်ရဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် နေရာဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးအကြောင်းရေးချင်ပါတယ်ဗျာ။ မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပေါ်အမြင်လေးကိုရေးဖွဲ့ထားတာပါ။ ကိုသစ်မင်း ရဲ့ ကွန်းမန့်လေးကို ပြန်ဆွေးနွေးထားတာလေးက ဖေါ်ပြသင့်တယ်ထင်လို့ ကျွန်တော်လည်း နည်းနည်းကြိုက်မိလို့ ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
ဦးသစ်မင်း – ဆရာမ ဂျူး ရဲ့ “နံရံ ၏ အခြားတစ်ဖက်၌” ခေါင်းစဉ် ကိုယူသုံး ရရင် သေခြင်းရဲ့ နောက်မှာ ဘာသာပေါ်လိုက်ပြီး
ဥပမာ – ဗုဒ္ဓဘာသာ နဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာ
နောက်ဘဝ ကောင်းခြင်း/ မကောင်းခြင်း၊ ကောင်းကင်ဘုံ ကိုရောက်ခြင်း/ မရောက်ခြင်း စသဖြင့် ကွဲပါတယ်။ (Note – ကျွန်မ အနေနဲ့ ကတော့ မမြင်နိုင်တဲ့၊ မသိနိုင်တဲ့ အကြောင်းတွေမှာ ဝိဝါဒ ကွဲ မနေဘဲ ဘုံတူနေတဲ့ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး မေတ္တာထားခြင်း၊ နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးခြင်း၊ အကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်တာ တွေ ရှောင်ရှားခြင်း ဖြင့် ဘယ်သူမဆို နံရံ ၏ အခြားတစ်ဖက် ကို ကောင်းစွာ ကူးနိုင်ဖို့စိတ်ဖြစ်ပါမယ်။)
လောလောဆယ် တိုင်းပြည်ကံကြမ္မာ ကတော့ “နံရံ ၏ အခြားတစ်ဖက်၌” ပါဘဲ။
ဒီတော့ လက်ရှိ အများအကျိုး ကို စေသနာသန့်သန့် နဲ့ လုပ်ခဲ့သူများ ရဲ့ သမိုင်းကတော့ အရုပ်မဆိုး သင့်ပါဘူး မဟုတ်လား။
ဝမ်းနည်းစရာ တစ်ခုကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အတွက် အဖက်ဖက် က အဆင်းဘီးတွန်း မဲ့ သူတွေ ရံနေတာပါဘဲ။ ဝှက်ဖဲကိုင်ထားသူတွေ လဲ အပြည့်နဲ့။
အဲဒါကိုတော့ သတိထားစေချင်တယ်။ တနည်းတော့ လဲရှိပါတယ်။ အဲဒီ အဆင်းဘီးတွန်း မဲ့ သူတွေ ဝှက်ဖဲကိုင်ထားသူတွေ လဲ သမိုင်းကြောင်းမှာ ပါမှာပါဘဲ။ ကိုယ့်နာမည် ကို ဘယ်လိုတပ်စေချင်လဲ ဆိုတာတော့ ကိုယ့်အပြုအမူ ပေါ်တည်ပါမယ်။
ဒီတော့ မအောင်မြင်ရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ မှားလို့ ဆိုပြီးတော့ မပုံသင့်ပါဘူး။
အဲဒီ လူတွေမှာရော၊ ကျွန်မတို့ အားလုံး မှာပါ တာဝန်ရှိတာဘဲ မဟုတ်လား။
ဒီပို့စ်က Khin Latt ရဲ့ ပထမဆုံးပို့စ်ပါ။ ဖတ်ကြည့်ရမယ့်ပို့စ်စာရင်းထဲမှာ ဒီပို့စ်လေးကိုလည်း ထည့်သွင်းလိုက်ပါကြောင်း။
whowho ရဲ့ သေခြင်းအပေါ်နောက်ဆက်တွဲခံစားမှု ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးကတော့ whowho ရဲ့ သေခြင်းအပေါ်အမြင်လေး ကို မယ်တော်ကြီး ရဲ့ ခန္ဓာဝန်ချတာလေးနဲ့ ဥပမာပေး တင်ပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ whowho ရဲ့ တရားပြပေးနေတဲ့ ပို့စ်လေးတွေကို ဖတ်နေကြ ပရိသတ်တွေ ဖတ်ကြဘို့ပါဗျာ။
Patriot က ညီညီ (သံလွင်) ၏ Facebook စာမျက်နှာ မှ “ရန်ကုန်ကို စင်္ကာပူ နဲ့ တူချင်တယ်ဆိုရင်” ဆိုတဲ့ဆောင်းပါး လေးကို ပို့စ်အဖြစ် တင်လာပါသည်။ ထို့ကြောင့် ညီညီ (သံလွင်) အား ကျေးဇူးတင်ကြောင်းလေး ပြောချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ ပိုစ်လေးက စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပြီး ဖတ်သင့်တယ်လို့ ထင်တာကြောင့် အစလေးကို နည်းနည်း ဖေါ်ပြပေးချင်ပါသည်။
ခုတလော မီဒီယာတွေမှာ ဖတ်လိုက်ရသည်။ ရန်ကုန်ကို စင်္ကာပူနှင့်
တူအောင် လုပ်ရန် သမ္မတကြီးက လမ်းညွှန်မှု ပေးထားသည်ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ထို့အတွက်
စင်္ကာပူတွင် ၁၂နှစ်တာမျှ နေထိုင်ခဲ့သည့် ကျွန်တော့် အတွက် တွေးစရာတွေ ရလာသည်။
တခေတ်တခါက အာရှတွင် ထိပ်တန်းဖြစ်ခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ရန်ကုန်မြို့တို့ကို စင်္ကာပူ၏
အမျိုးသားေခေါင်းဆောင်ကြီး ဖြစ်သည့် လီကွမ်ယူက အားကျခဲ့ရသည်ဟု ၎င်းရေးသားသည့်
စာအုပ်ထဲတွင် ဝန်ခံထားပြီး စင်္ကာပူရှိ အချို့သော နေရာများတွင် ရန်ကုန်လမ်း၊ ပဲခူးလမ်း၊ မော်လမြိုင်
လမ်း စသဖြင့် မှည့်ခေါ်ခဲ့သည့် လမ်းနာမည်များ ခုထိ ရှိဆဲ ဖြစ်သည်။ ခုတော့ သံသရာ
ချားတပတ်ပြန်လည်ပြီ ထင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့၏ ရန်ကုန်ကို အထင်ကြီး အားကျစိတ်ဖြင့်
အတုယူခဲ့ရသည့် စင်္ကာပူကို ကျွန်တော်တို့ ပြန်၍ နမူနာ ယူရချေဦးမည်။ ဤအတွက် ကျွန်တော်
စိတ်ဓာတ်မကျပါ။ ရည်မှန်းချက်ကင်းမဲ့စွာ ဖြတ်သန်းခဲ့ကြရသည့် အနေအထားမှ ဦးတည်
ချက်များ ရှိလာ၍ စိတ်အား တက်ရပါသည်။ ရည်မှန်းသည့် အတိုင်း လုပ်ဆောင်ကြဖို့တော့
ပြီးမှ အတုခိုးစရာလေးများကို တစ်ချက်ခြင်း ရှင်းပြပါသည်။ အဆုံးသတ်တွင် နှိုးဆော်ထားသော စာလေးကို သဘောကျ နှစ်ချိုက်မိပါသဖြင့် ထပ်မံဖေါ်ပြပါရစေခင်ဗျာ။
ပိတ်ထားလျှင် မှောင်နေပါလိမ့်မည်။ ပွင့်မှ လင်းမည်။
လင်းမှ မြင်ပါမည်။ မြင်မှ သာ(ယာ) ဝပြောပါလိမ့်မည်။ မည်မျှပင် နောက်ကျနေပါစေ။
ကျွန်တော်တို့ အတူတကွ တွန်းတင်ကြရပါမည်။ သူများ ခြေတလှမ်းလှမ်းလျှင်
အလှမ်းပေါင်းများစွာ လှမ်းကြဖို့ လိုပါမည်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်သားများ ညီညီညွတ်ညွတ်
စည်းစည်းလုံးလုံးဖြင့် ကြိုးစားကြမည်ဆိုလျှင် စင်္ကာပူကို ဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း
ကျော်ဖြတ်သွားနိုင်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့၏ ဖုန်းများ ဆက်သွယ်မှု
ဧရိယာပြင်ပသို့ ရောက်နေခြင်း မရှိမှသာ လျင်မြန်စွာ ရွေ့လျောနေသည့် ကမ္ဘာကြီးနှင့်
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသားများ ပြန်လည် ချိတ်ဆက်မိမည် ဖြစ်ပါကြောင်း။
တန်ဘိုးရှိသော ဒီပို့စ်လေးအတွက် ကျွန်တော် တို့ဖတ်ရှုဘို့ ရှာဖွေဖတ်ရှု ဝေမျှပေးသော patriot နှင့် ရေးသူ ညီညီ (သံလွင်) တို့အား အထူးကျေးဇူးတင်တဲ့ အကြောင်းလေး ပြောချင်မိပါသည်။ မဖတ်မိလိုက်လို့ ကွန်းမန့်မပေးလိုက်မိတာလေးကိုလည်း အခုတစ်ခါတည်း ပေးလိုက်တယ်လို့သာ မှတ်ပေးပါ patriot ရေ။ ကျွန်တော်တို့ ရွာသူရွာသားတွေလည်း ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ကြရမယ့် ပို့စ်လေးတစ်ခုအဖြစ် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ညွှန်းဆိုလိုက်ပါသည်။
နောက်ထပ် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ညွှန်းချင်တဲ့ ပို့စ်လေးတစ်ခုကိုလည်း ပြောပြချင်ပါသေးတယ်။ chityimhtoo ရေးတဲ့ အမျိုးသမီးရေးရာက မာဆတ်ဖွင့်စားတာလားတောင် ထင်ရတယ် ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးပါ။ ပို့စ်က တိုတိုလေးပါ။ အခုပဲ ဖတ်ကြည့်ဘို့ ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းနေတဲ့ စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရဲ့ အကြီးဆုံး crown နာမည်နဲ့ မာဆက်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့ မကြည်ဆိုတာအမျိုးသမီးရေးရာရဲ့ဥက္ကဌကြီးပါဗျာ၊ဝတ်စုံကြီးနဲ့မိန့်မိန့်ကြီးပေါ့။ မသိရင်အမျိုးသမီးရေးရာကဘဲ မာဆက်ဖွင့်စားနေသလားတောင်ထင်မိပါတယ်။
အင်မတန်မှလည်းရှက်ဘို့ကောင်းပါတယ်။တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေအနေနဲ့မသိလို့ခွင့်ပြုထားတာလား သိသိနဲ့ခွင့်ပြုထားတာလား။မသိရအောင်လည်းလူတွေဘဲ တိရိစာ္ဆန်တွေမှမဟုတ်တာ။
ဒီမနက်လည်းဒီလောက်ကားတွေ ဂျမ်းဖြစ်နေတဲ့ လမ်းမှာ မာဆက်မိခင်ကြီးနဲ့ မာဆက်ကကောင်မလေးတွေ အကုန်ဖိုးယိုးဖါးယား စကတ်တိုတွေ နီကြောင်ကြောင်တွေနဲ့ လမ်းပိတ်ပြီးထုတ်စီးထိုးနေတာကို ရပ်ကွက်လူကြီးတွေကစောင့်တောင်ပေးနေပါတယ်ဗျာ။ရပ်ကွက်တွေထဲမှာဧည့်စာရင်းစစ်ရင် မာဆက်တွေကိုလုံးဝမစစ်ဘူး
ရိုးရိုးအိမ်တွေကိုလိုက်စစ်ကျတယ်။ဒီလို လူ့တိရိစာ္ဆန်ရပ်ကွက်လူကြီးတွေကိုသေချာစီစစ်ပြီး တရုတ်ပြည်လိုသေဒဏ်ပေးသင့်ပါတယ်။
အဲဒါလေးပါ။ ဒီပို့စ်ကတော့ ပို့စ်ထက်ကို ကွန်းမန့် ပေးသူ အဘ FR နဲ့ ကြောင်ကြီးတို့ရဲ့ ကွန်းမန့်ကြီးတွေက အတွေးအခေါ်ဒသနတွေအပြည့်နဲ့ စဉ်းစားစရာကောင်းတာကြောင့် ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင်လို့ ခံယူထားသူများ အတွက်ပါ ။
အဘ ကတော့ မာဆတ် လုပ်စားတာကို မကန့်ကွက်ပါဘူး ။
Even ပြည့်တန်ဆာ လုပ်စားရင်တောင် မကန့်ကွက်ပါဘူး ။
တည်ဆဲ ဥပဒေတွေ ဆိုတာ
အစိုးရသစ် တခုတက်ရင် တခါပြောင်း
လူတွေ အတွေးအခေါ် အယူအဆ တစ်ခုပြောင်းရင် တခါပြောင်း နဲ့
အမှန် တရားပါ တရားမျှတပါတယ် လို့ မပြောနိုင်ပါဘူး ။
အထူးသဖြင့် လက်ရှိ အစိုးရ လက်ထက်မှာ
ဥပဒေ နှင့် တရားမျှတမှုကို အဘ အယုံအကြည် မရှိပါဘူး ။
အဘ ကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တဦးဖြစ်တဲ့အလျောက်
ဂေါတမ ဗုဒ္ဓ ဘုရား က ခဏ ခဏ မပွင့်နိုင် တဲ့အတွက် ၊
တရားတော် များကလည်း ခဏ ခဏ မပြောင်း တဲ့အတွက် ၊
တရားတော် များကလည်း မှန်ကန်တယ်လို့ ယူဆတဲ့အတွက် ၊
ဂေါတမ ဗုဒ္ဓ ဘုရား ဟောကြားတဲ့ တရားတော် တွေနဲ့ပဲ
အမှန်တရား နှင့် တရားမျှတမှုကို ဆုံးဖြတ်ပါတယ် ။
ဘုရား က မာဆတ် ပြည့်တန်ဆာ အလုပ် မလုပ်စားရဘူး လို့မဟောခဲ့ပါဘူး ။
မလုပ်စားသင့်ဘူး လို့ဟောခဲ့တာဆိုလို့ လက်နက် ၊ အဆိပ် —– စသဖြင့် ၊
လုပ်သင့်တယ် စေါင့်ထိန်းသင့်တယ် လို့ဟောခဲ့တာဆိုလို့ ငါးပါးသီလ —– စသဖြင့် ၊
အမျိုးသမီးရေးရာ ရဲ့ ဥက္ကဌကြီး နှင့် ရပ်ကွက်လူကြီးတွေ
ကောင်းတယ် မှန်တယ် လို့ မဆိုလိုပါ ။
ကောင်းလား မကောင်းလား လဲမသိပါဘူး ။
ပြောကြားသူများအနေနှင့် မိမိကိုယ်ကို အရင်ကောင်းအောင် ပြုပြင်စေလိုပါတယ် ။
ဥပမာ – ငါ မုသာဝါဒ လုံးဝ မပြောပဲ ဘယ်နှစ်ရက် နေနိုင်ပြီလဲ ဆိုတဲ့ အခြေခံ ကနေစကြည့် လိုက်ပါ ။
အဲဒီအခါမှာ ကိုယ့်ရဲ့ သီလ သမာဓိ အခြေအနေမှန်ကို သဘောပေါက်သွား ပါမယ် ။
သူများတွေကို လွယ်လွယ် အပြစ်တင်ချင်စိတ်လည်း လျော့သွားပါမယ် ။
အမျိုးသားခေါင်းဆောင် အမေစု ကိုယ်တိုင်က
” မြန်မာ လူမျိုးတွေဟာ မနာလိုစိတ်များကြတယ်လို့ မကြာခင်က ပြောခဲ့ပါတယ် ”
အဘ Personal အမြင်အရ
ပုခုံးပေါ်မှာ အပွင့်တွေ တန်းစီတပ် ထားပြီး
တိုင်းပြည်ပိုက်ဆံတွေကို လာဘ်ပေး လာဘ်ယူနည်း နှင့်
အာဏာ အလွဲသုံးစားမှု နည်းမျိုးစုံ နှင့် ခိုးနေတဲ့ သူတွေထက်စာရင် ၊
ကိုယ်ပိုင် ခန္ဓာကိုယ် နှင့် ခွန်အား ကိုရင်းနှီးပြီး ရိုးသားစွာ
မာဆတ် နှင့် ပြည့်တန်ဆာ လုပ်စားနေကြတဲ့ မိန်းကလေးငယ်တွေက
ဗုဒ္ဓ ဘာသာ အမြင်အရ အများကြီး ပိုမွန်မြတ်ပါတယ် ။
အဲလိုခိုးနေတဲ့ လူကြီးတွေကိုတော့ လက်အုပ်လေး ချီကာချီကာ နှင့် ဖားကြပြီး ၊
ခန္ဓာကိုယ် နှင့် ခွန်အား ကိုရင်းနှီးပြီး
ရိုးသားစွာ လုပ်စားနေကြတဲ့ မိန်းကလေးငယ်တွေကိုတော့ တဆုံး နှိမ်ချချင်ကြတဲ့ ၊
မြန်မာ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ လူထုကြီး ကိုတော့ နားမလည်နိုင်အောင်ပါပဲ ။
အမှန်ဆိုရင် အဘရဲ့ သင်္ဘော Captain အလုပ် နှင့်
အဘ မိန်းမ ရဲ့ ဆရာဝန်မကြီး အလုပ် တွေဟာလဲ
ကိုယ်ပိုင် ခန္ဓာကိုယ် နှင့် ခွန်အား ကိုရင်းနှီးရတဲ့ အလုပ်တွေပါပဲ ။
အဘဖောပြောတဲ့ မာဆက်လုပ်စားတဲ့ မိန်းခလေးများအပေါ် အမြင်မစောင်းဖို့ သဘောတူပါသည် သို့သော် ပြည့်တန်ဆာကိစ္စကိုတော့ နှိမ်ချခြင်းထက် ကြီးထွားမလာအောင် နည်းလမ်းရှာသင့်ပါသည်။ အမြတ်အစွန်းအလွန်ကြီးမားပြီး ဆူလွယ်နပ်လွယ်ရှိသမို့ စိတ်ဓာတ်မကြံ့ခိုင်သူ အချို့မိန်းခလေးများ ရေလိုက်မလွဲရအောင်တော့ စည်းရုံးပညာပေးရပါမည်။…………
မာဆက်လုပ်စားတဲ့ မိန်းခလေးများအပေါ် မျှမျှတတ ဆက်ဆံသ၍၊ အမြတ်မထုတ်သ၍၊ အနှိပ်ခန်းဗန်းပြပြီး အသွေးအသားရောင်းဝယ်မှု မလုပ်သ၍ လက်ခံနိုင်ပါသည်။ လက်မခံလည်း မရဘူးလေ၊ အဆက်အသွယ်ရှိရင် လူတိုင်းလုပ်နေကြတာ။ လူစိတ်ရှိသူများ ဖြစ်ဖို့သာ အဆိုးထဲကအကောင်း မျှော်လင့်ပါသည်။ နောက်တချက်က မတရားမလုပ်ပေမဲ့လည်း အဲဒီအခွင့်အရေးရဖို့ ဘယ်သူတွေကို ချနင်းထားသလဲ၊ မြန်မာ့နည်းမြန်မာ့ဟန် စီးပွားရေးလုပ်စဉ်အတိုင်း ကျွေးမွေးပေးကမ်းပြီးလုပ်တာ ဖြစ်ဖို့တော့လိုသည်။ ကိုယ်ချမ်းသာဖို့ အဆင်ပြေဖို့ တစုံတယောက်၊ အသင်းအဖွဲ့တခုခုကို နင်းခြေတက်ထားတာမျိုးဆိုရင်တော့ ဝိုင်းဆဲဖို့ သဘောတူပါ၏။
အဲဒါလေးပါဗျာ။ ဖတ်ကြည့်ကြပါလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဗျာ။
ငါတို့ သူကြီးဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးကို မောင်ရေချမ်းက တင်လာပါတယ်ဗျာ။ ငါတို့သူကြီးဆိုလို့ သူကြီးkai အကြောင်း ဘာများပြောမလို့လဲ ဆိုပြီး ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ ယင်လုံအိမ်သာ ဆောက်ဖို့ ရွာသားတွေကို စည်းရုံးရေးဆင်းတဲ့ သူကြီးတစ်ယောက်အကြောင်းဖြစ်နေပါတယ်ဗျာ။ သူကြီး က ရွာသူားတွေ ယင်လုံအိမ်သာ ကို လက်ခံသွားအောင် မာယာ သုံးပြီး မားကက်တင်း ဆင်းတာလေးကို ရေးထားတာလေးပါ။ ကောင်းပါတယ်ဗျာ။
မောင်ရေချမ်း ရဲ့ ရည်းစားစာ ချစ်တတ်စ ဆိုတာလေးကတော့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ပါ။
mg wine က နဂျီအိမ်က ဆေးဘက်ဝင်သလား ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးတင်လာပါတယ်။ နဂျီအိမ်ရဲ့ ဆေးဘက်ဝင်ပုံလေး ရေးပြထားတာပါ။ ပို့စ်ထဲမှာ ပါတဲ့ ဆရာထက်ဆိုတာ မန်းဂဇက် က ဆရာထက်ဝေးကို ပြောတာလား ကိုမောင်ဝိုင်းရေ။
မှော်ဆရာက သတင်းထူး-လကြတ်နေပြီ ထွက်ကြည့်ကြ (အခုချက်ခြင်း) ဆိုတာကို ပို့စ်တင်လာပါတယ်။ Live လွှင့်တဲ့ သတင်းလိုပေါ့ခင်ဗျာ။ လကြတ်နေတဲ့ သတင်းလေးပါ။
aye.kk ရဲ့ ကျေးဇူးမြင် ဆိုတာလေးက ကဗျာတစ်ပုဒ်ပါခင်ဗျာ။
လကြတ်ပုံများ ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးကို windtalker က ဂဇက်ရဲ့ အဦးဆုံး အထူးဆုံး အဖြစ်တင်လာပါတယ်။ မှော်ဆရာတောင် လက်မှိုင်ချသွားရတဲ့ ကိုပေပါခင်ဗျာ။ မန္တလေးည လကြတ်ပုံလေးများအတွက် ကိုပေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အင်ဇာဂီ ရဲ့ ကွန်းမန့်လေးက ကိုပေ့အတွက် အားဖြစ်စေမှာမို့ ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
သတင်းဒါ့ပုံဟာ သတင်း ဒ့ါပုံသာဖြစ်ပါသည်..
ပုံထွက် ခွာလထီသည် သာမညသာဖြစ်သည်
ကြည့်လို့ ရယုံ ပြတ်သားပြီး သတင်း တန်ဖိုး စစ်မှန်ဖို့သာလိုပါသည်…
မှော်ဆရာကလည်း လကြတ်တာကိုပဲ ၁၀.၁၂.၂၀၁၁ ည ၈ နာရီ ၃ဝ လကြတ်မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံ အမည်နဲ့ ပို့စ်တင်လာ ပါတယ်။ လကြတ်တာလောက်တော့ ရွာသားတွေက ရိုးတယ်လို့ ပြောရလောက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကိုရင်စည်သူ ရဲ့ သံတံခါး ပို့စ်လေး တင်ပြန်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ယတြာအလွန်ကောင်းသည်ဟု နာမည်ကြီးသော အသက် ၅ဝ ကျော်ခန့်ရှိ ဦး သိဒ္ဓိကျော် နှင့် အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေသော မာလာဆွေတို့ ၏ ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်ပါသည်။ အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေသဖြင့် ယတြာချေပေးရင်း ဦးသိဒ္ဓိကျော်က မာလာဆွေကို ချစ်မိသွားပါလေတော့သည်။ အင်း အိမ်ထောင်ရှိတဲ့ မိန်းမကို ဗေဒင်ဆရာက ကြိုက်သွားတာနော်။ နောက်ဆုံး မာလာဆွေ တို့ လင်မယား ပြန်အဆင်ပြေပြီး ဦးသိဒ္ဓိကျော်တစ်ယောက်ဘယ်လိုဇာတ်သိမ်းမလဲဆိုတာကိုတော့ ကိုရင်စည်သူရဲ့ မူရင်းပို့စ်ကို ဖတ်ကြည့်ပါလို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီဇာတ်လမ်းက ကျော်ဟိန်း နဲ့ ဗီဒီယို ရိုက်ဘူးတာတော့ သေချာပါတယ်။ ဦးသိဒ္ဓိကျော် နေရာက ကျော်ဟိန်း၊ မာလာဆွေနေရာက စိုးမြတ်သူဇာ တို့နဲ့ ရိုက်ထားတာတော့ မှတ်မိတယ်။ ဇာတ်ကားနာမည်ကိုတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး။ အဲဒီဇာတ်ကား ကြည့်တုန်းကလည်း ဗေဒင်ဆရာက လင်ရှိမိန်းမကို ကြိုက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းကြီး မကောင်းပါဘူးပေါ့ဗျာ။ အခု ကိုရင်စည်သူက ပို့စ်တင်လာတော့လည်း လင်ရှိမိန်းမ ကို ကြိုက်တာကြီးကတော့ အင်း ကောင်းဘူးပေါ့ဗျာ။ အဲဒါလေးပါဗျာ။
ရင်ငြိမ်းနွေ ရဲ့ ဓာရဏပရိတ် ပို့စ်လေးကတော့ ဓါရဏပရိတ် အကြောင်း ရှင်းပြထားတာလေးပါ။ သူကြီး နဲ့ ကြောင်ကြီးတို့ရဲ့ ကွန်းမန့်လေးတွေကလည်း ဖတ်ချင်စရာကောင်းတာကြောင့် ဖတ်ကြည့်ကြပါလို့။
မန္တလာသူ ရဲ့ ဦးခိုက်ပူဇော် ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော်နှင် ့မန္တလေး ပို့စ်ကတော့ မန္တလေးရောက် စွယ်တော် အကြောင်းကို ဓါတ်ပုံလေးတွေနဲ့ တင်ပြထားတာပါ။ ဦးဘဇင်းရဲ့ ကွန်းမန့်လေးကို ဖေါ်ပြပေးချင်ပါတယ်။
တစ်ခုရှိတာကတော့ ဓာတုစေတီဆိုတဲ့ အသိစိတ်နဲ့
အလှူပေးသူရဲ့ သဒ္ဓါရယ် အလှူကိုလက်ခံရရှိတဲ့ ဓာတုစေတီရယ် ကြားမှာ
ကိုယ်က မစ္ဆရိယစိတ်မထားဘို့က တော်တော်အရေးကြီးမယ် ထင်တာဘဲ ( အထင် )
ဒီကြားမှာ ပြောရခက်နေတာက ဘုရားဒါယကာလို့ဆိုနိုင်မလား
ဘုရားကို ဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်မပေးတာတော့ သိပ်ဘဝင်မကျမိပါဘူး
မဆီမဆိုင် ဟိုးအနော်ရထာခေတ်ကို သတိရမိပါရဲ့
ဘုရားသာသနာ လာပင့်တာကို ဘုရင်ကိုယ်တိုင်က
ဆိုတော့ကာ မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ ဓာတုတော်ဘဲနော
သတ္တဝါတွေ လိုအပ်သလို ကြည်ညိုပါစေပေါ့
ခုဟာက လူတွေကိုတော့ မှတ်တမ်းတင်ခွင့်မပေးဘူး
မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ ဓာတုတော်တွေကို ရုံသွင်းစားသလိုတောင်
အင်းအင်းအင်း ပြောရရင်တော့ အောလပုံဘဲ
pooch ရဲ့ ပထမတန်းစား လင်းလင်း ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးအကြောင်း ပြောချင်ပါတယ်ဗျာ။
အေးအေးဆေးဆေး ဖတ်ကြည့်တော့မှ ကျွန်တော် အကြိုက်တွေ့သွားတဲ့ ပို့စ်လေးတစ်ခုကတော့ ပထမတန်းစားလင်းလင်း ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးပါခင်ဗျာ။ pooch ရေးတဲ့ ပို့စ်လေးပါ။ အဆိုတော် လင်းလင်း ရဲ့ ဖျော်ဖြေမှုကို သွားကြည့်ရာက ရလာတဲ့ ဖီလင်လေးကို ရေးထားတာပါ။ မန္တလေးသူ ဖြစ်ပုံရတဲ့ (ဆိုလိုတာက မန်းမှာ နေနေတိုင်း မန်းသူ မန်းသားစစ်စစ် မဟုတ်ကြတာကို ပါ) pooch က လင်းလင်းကိုတောင် မန္တလေးသား လင်းလင်း လို့ သုံးနှုန်းသွားတာလေး တွေ့လိုက်မိတာပါ။ pooch က လင်းလင်း မန္တလေးသား တစ်ယောက်ဖြစ်တာ ကို ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားစွာ ပြောဆိုသွားတာလေးကို အမှတ်တရ ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
ဒီနေ့ ကြည့်မိတဲ့ ပွဲက တော့ ထုံးစံအတိုင်း ထူးမခြားနားပွဲ တွေထဲက တခုပါပဲ ။ သို့သော် မန္တလေးသား လင်းလင်းကတော့ ထူးထူးခြားခြားလေး တခု လုပ်သွားပါတယ်။ ကျမ ကြုံဖူးသမျှထဲမှာ အနုပညာသည်တယောက်က ဒီလိုပွဲမျိုးမှာ ဒီလို ပြောတာကို ပထမဆုံးအကြိမ် ကြားဖူးခြင်းပါ။ အမေစုရဲ့ ရှေ့ဆောင်လမ်းပြပြီး စည်းရုံးမှုတွေထဲ က သက်ရောက်လာတဲ့ အသီးအပွင့်တခုလို့ မြင်မိပါတယ်။
အမေစုရဲ့ ရှေ့ဆောင်လမ်းပြမှု ဆိုတာလေးက ပါလာတော့ လင်းလင်း ဘာများပြောတာလဲဆိုပြီး ကျွန်တော် စိတ်ဝင်စားလို့ ဆက်ဖတ်ကြည့်မိပါတယ်ဗျာ။
လင်းလင်းက သီချင်းတပုဒ်ကို စစချင်း ဆိုအပြီးမှာ ဒုတိယတပုဒ်အတွက် စကားတခွန်းပြောပါတယ။် ဟိုး……နံရံတွေနောက်မှာ ရှိနေသေး ကျန်နေသေး မလွတ်မြောက်နိုင်သေးတဲ့ ကျနော်တို့ ညီအကို မောင်နှမတွေအတွက် လွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ ဆိုပြီး သူတို့အပေါ်မှာ အခုလက်ရှိအစို်းရရဲ့ မလွှတ်ပေးသေးတာကို ဖေါ်ပြချင်တဲ့ သဘောနဲ့ အရင်အတိုင်း မပြောင်းလဲသေးပါဘူး ဆိုပြီး သူ့သီချင်းတွေထဲက “မပြောင်းလဲသေးဘူး” ဆိုတဲ့ သီချင်းတပုဒ်ကို ဆိုပြပါတယ်။
လင်းလင်းပြောသွားတာလေးအတွက် ကိုကြောင်ကြီး က လက်ခုတ်တီးပေးလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် ပြောရဲပါတယ်။ ကိုကြောင်ကြီး ခံစားနေရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ အကုန်လွှတ်မပေးသေးတာကို လင်းလင်းက အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် ပရိသတ်မြောက်များစွာကြားထဲမှာ တရားဝင် ပြောကြားသွားတာကြောင့်ပါ။ ကိုကြောင်ကြီးများ အမေရိကားကနေ လင်းလင်းကို လှမ်းပြီး ကွန်ထရိုးပေးထားသလားတောင် ထင်မိပါတယ်ဗျာ။ ကိုကြောင်ကြီး ဒီပို့စ်မှာ ပေးခဲ့တဲ့ ကွန်းမန့်မှာတော့ ဒီအကြောင်းကို ဆွေးနွေးသွားတာ မတွေ့လိုက်ရပါဘူး။ ဒီထက်အရေးကြီးတဲ့ အကြောင်းကို ဆွေးနွေးလိုက်ရလို့ ဒါလေးကို မဆွေးနွေးသွားတာ ဖြစ်မှာပါဗျာ။ ဆက်ဆွဲလိုက်ရအောင်။ (ကိုသစ်လေသံ ခဏငှားသုံး)။
နောက်တပုဒ် မဆိုခင်မှာ သူက ပြောပါသေးတယ် ကျနော်တို့ မန ္တလေးသူ မန ္တလေးသားများရဲ့ ကျုံးကြီးဟာ ခုဆိုရင် မန်းမြို့သူမြို့သားတွေနဲ့ ဝေးလို့ တစိမ်းတွေကြားမှာ အထီးကျန်နေပါပြီတဲ့ ။ ဒါကြောင့်မို့ သူက ကျုံးကြီးကို ပြောချင်တယ်တဲ့ ” နေတတ်သလိုသာနေပါတော့ ” ဆိုပြီး အဲ့ဒီသီချင်းကို ဆိုပါတယ်။
ရင်ကိုလာမှန်သော စကားလုံး မျှားချက်များလို့ တင်စားပါရစေခင်ဗျာ။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ချာတိတ်တွေပဲ အကြည့်များကြတဲ့ စတိတ်ရှိုးတစ်ခုက ဒီလို အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ စကားလုံးတွေ ကြားရတယ်ဆိုတာ ပြန်ပြောပြပေးတဲ့ pooch ကိုလည်း ကျေးဇူးတင် မိပါတယ်ဗျာ။ ဆက်ဖတ်ရအောင်ဗျာ။
နောက်ဆုံးသီချင်းတပုဒ်ဆိုအပြီးမှာ သူက ” ကျနော်တို့တွေ အားလုံး လိပ်ပြာသန့်သန့်နဲ့ကြောက်ရွံ့မှု ကင်းပြီး နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်မောကျနို်င်မဲ့ နေ့ တွေ အမြန်ဆုံး ရောက်ရှိလာပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်လို့ ” ပြောသွားပါသေးတယ်။
ဒါလေးကလည်း အပေါ်မှာ ကျွန်တော် ကြိုက်ခဲ့တဲ့ kotun winlatt ရဲ့ နည်းနည်းပြောမယ် ဆိုတဲ့ ပို့စ် က ပေးချင်တာနဲ့ အတူတူပဲလို့ ခံစားရပါတယ် pooch ရေ။ နည်းနည်း ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါဗျာ။
အိုင်စီ ရှိုးကတော့ လူတော်တော် များများ ကြည့်ဘူးကြတာပါပဲ။ သိတ်ထူးဆန်းလှတဲ့ကိစ္စ မဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော် ဒီလိုမျိုး ကိစ္စတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ ကြားဘူးတာ ဒါပထမဆုံးပါဗျာ။ ဒီလိုမျိုး သေသေချာချာ ပြန်ပြောပြတဲ့ အတွက် ပို့စ် ပိုင်ရှင် pooch ကို ကျေးဇူးတင်တဲ့ အကြောင်းလေးလေးစားစား ပြောချင်ပါတယ်ဗျာ။ ရွာသူရွာသားတွေ အနေနဲ့ လည်း သေသေချာချာ ပြန်ဖတ်ကြည့်ကြစေချင်ပါတယ်။ ဒါက ပို့စ်အတွက် ကျေးဇူးတင်တာပါ။
ဒီပို့စ်ကနေ မှတ်သားစရာ ကောင်းတဲ့ ကွန်းမန့်လေးများလည်း ပါလာခဲ့ပါတယ်ဗျာ။ အရင်ဆုံး အင်ဇာဂီ ပြောသွားတဲ့ ပါဝါ ၅၄ ဆိုတဲ့ ကိစ္စကလည်း မှန်ပါကြောင်း ထောက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာ။ အဲဒီအချိန်က အစိုးရက ဘယ်လောက်အထိ သဘောထားသေးသိမ်သလဲ ဆိုတာ အဲဒါလေးကို ပြန်ကြည့်ရုံနဲ့ သိနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ အမေစု အိမ်နံပတ်က ၅၄ ဆိုတော့ လေးဖြူက ပါဝါ ၅၄ ဆိုပြီး စီးရီးခေါင်းစဉ်တတ်တာတောင် မခံမရပ်နိုင်တွေဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ဒါတွေက သမိုင်း ဖြစ်သွားပါပြီ ခင်ဗျာ။ ပြင်လို့လည်း မရတော့ပါဘူး။
နောက် Foreign Resident ရဲ့ ကွန်းမန့်လေးကို ဖေါ်ပြပေးချင်ပါတယ်။
” ကျမရင်ထဲမှာ နှစ်သက်တဲ့ အနုပညာသည်တွေရဲ့ နေရာတွေလည်း မသိမသာနဲ့ ပြောင်းသွားပါတယ် ”
အနှစ်ပါတဲ့ Post လေးပါ Pooch ရေ ။ Bravo ပါ ။
အဘ လည်း လင်းလင်း ရဲ့ သီချင်း တွေကို နားထောင်ကြည့်ဦးမှပါပဲ ။
မန္တလေးသူ မန္တလေးသားများရဲ့ ကျုံးကြီး နှင့် ပါတ်သက်လို့ကတော့ ၊
မန္တလေး ကို အသိမ်းခံလိုက်ရတာကို စိတ်မကောင်းပါဘူး ။
အဘ ကိုယ်တိုင်ကလည်း တရုတ် တစ်ယောက် ဖြစ်နေတော့ကာ —-
တရုတ်တွေက မြန်မာပြည်မှာ အခွင့်ထူးလဲ မရခဲ့ပါဘူးကွယ် ။
အဘ တစ်သက်တာလုံး အဖိနှိပ်ကြီးပဲ ခံခဲ့ရတာပါကွယ် ။
တရုတ်တွေက မန္တလေး ကို မတရား အနိုင်ကျင့် သိမ်းသွားတာတော့ မဟုတ်ပါဘူးကွယ် ။
မြန်မာတွေ ညံ့လို့ ပျင်းလို့ ဆင်းရဲရပြီး ငွေနှင့်ပေါက်ပြီး အဝယ်ခံလိုက်ရတာပါ ။
မြန်မာတွေ မညံ့တဲ့ မပျင်းတဲ့ အချိန်ကြရင် ပြန်ဝယ် နိုင်ပါတယ်ကွယ် ။
ကြိုးစားကြပေါ့ကွယ် ၊ မှီနိုင်ပါသေးတယ် ။
ကြောင်ကြီး ရဲ့ ကွန်းမန့်လေးကိုလည်း ဖေါ်ပြချင်ပါသေးတယ်။
တရုတ်တွေ မန်းလေးကို ငွေနဲ့သိမ်းသွားရခြင်းမှာ သူတို့က တရုတ်ပြည်ကလာတယ်၊ ငွေအရင်းအနှီးပါတယ်၊ လုပ်ငန်းအဆက်သွယ်ရှိတယ်။ သူတဲ့ဝင်လာစ အချိန် ၁၉၉ဝခုနှစ်အစောပိုင်းတွေမှာ မြန်မာတွေ ငွေကြေး၊ အသိပညာ၊ အတတ်ပညာ၊ အဆက်အသွယ် ဘာမှအဆင်သင့် မဖြစ်သေးဘူး။ မန်းလေး မပြောနဲ့ နိုင်ငံတကာနဲ့ ကူးလူးဆက်ဆံမှုများတဲ့ ရန်ကုန်သားတွေတောင် မျက်စိနား မပွင့်သေးဘူး။ ပိုဆိုးတာ စစ်အစိုးရက သတင်းဆက်သွယ်မှုနည်းပညာကို ပိတ်ဆို့ထားတယ်၊ မျက်စိနားဖွင့်ပေးမဲ့သူတွေကို နှိပ်ကွပ်ထားတယ်၊ ဝင်လာတဲ့တရုတ်တွေနဲ့ ပေါင်းရိုက်စားတယ်။ ဒါက အပြင်လူဖက်အမြင်နဲ့ပြောတာပါ။
စစ်ဗိုလ်များဖက်က အမြင်နဲ့ပြောကြည့်ရင် သူတို့မှာ လက်နက်၊ အာဏာရှိတယ်၊ အခြေအနေကို ကောင်းစွာထိန်းချုပ်နို်င်တဲ့ အနေအထားရှိတယ်။ သို့သော် တိုင်းပြည်ကို ဘယ်လိုဖွံ့ဖြိုးအောင် လုပ်ရကောင်းမှန်းမသိဘူး။ ဒေသဆိုင်ရာအဆင့်မှာဆိုလဲ သက်ဆိုင်ရာ စစ်တိုင်းမှူးများ ပိုဆိုးပါလိမ့်မယ်။ ဒါကိုသိတဲ့ တရုတ်က ချက်ကောင်း ဝင်နေရာယူတယ်။
သိထားသလောက် ဝင်လာတဲ့တရုတ်များမှာ အမြင်နှစ်မျိုးပါတယ်။ တမျိုးက သူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအတွက် အဲဒီအချိန်က အရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ် အရသာကို သေချာမသိသေးတဲ့ တရုတ်ကူမြူနစ် အစိုးရကို စိတ်မချဘူး။ နောက်တမျိုးက လူရည်လည်သူတွေ။ (ယူနန်ပြည်နယ် အရာရှိများကိုယ်တိုင် အားပေးအားမြောက် ပြုကောင်းပြုခဲ့ပါလိမ့်မယ်) သူတို့နေထိုင်ရာ ယူနန်ပြည်နယ်နဲ့ အနီးအနားတဝိုက်ထက် မြန်မာပြည်မှာ အခွင့်အလမ်းရှိတာ သိတယ်။ ရှန်ဟဲဆိပ်ကမ်းမြို့လို မျိုးမှာနေသူတရုတ်များ မြန်မာပြည်လာ စီးပွားရှာတာ ရှားပါလိမ့်မယ်။ သွားမယ့်သွား ဟောင်ကောင်၊ မကာအိုတို့ကို သွားမှာပေါ့။ စီးပွားရေးအကြောင်း မသိသေးတဲ့ မြန်မာတွေကို တံခါးဖွင့်ဖွင့်ခြင်းဝင်လာတဲ့ တရုတ်များ ဆရာလုပ်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ မြန်မာပြည်ရှိ ကုန်ဈေးနှုန်း၊ မြေယာ၊ စရိတ်စကများ မကြီးသေးဘူး။ သူတို့မှာရှိတဲ့ အရင်းအနှီးနဲ့ ကောင်းကောင်းလုံလောက်တယ်။ မလုံလောက်လဲ ချေးငှားလာ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများ ရောင်းချလာလို့ အဆင်ပြေတယ်။ မြန်မာထဲမှာ သိသူတတ်သူ မရှိသေးဘူး။ သမားရိုးကျ စီးပွားရေးအမြင်ပဲရှိတယ်။ တရုတ်များက စစ်အစိုးရအပေါ် အပြည့်ပုံအောတယ်။ သူတို့မှန်းတဲ့အတိုင်းလည်း ဖြစ်တယ်။ အကယ်၍များသာ စစ်အစိုးရ နှစ်ပိုင်းအတွင်းပြုတ်ရင် တရုတ်များ ဖျာလိပ်ပြည်တော်ပြန်ရမှာပါ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အသုံးအနှုန်းနဲ့ပြောရင်တော့ စွန့်စားရတာများရင် အမြတ်အစွန်းများမယ် ဒါမှမဟုတ် အရင်းနည်းနည်းနဲ့ အမြတ်ကြီးကြီး စားရမယ်။ တရုတ်ငွေယူလာတဲ့ ပေါက်ဖော်များအဖို့ မြန်မာပြည်မှာ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ ကောင်းကောင်းတတ်နိုင်တယ်။ ငွေရှိသူများကြတော့ ကျောက်တွင်းလိုမျိုး အချီကြီးဆင်းကိုင်တယ်။ ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ခြင်း တူပေမဲ့ တရုတ်ပြည်က အတက်၊ မြန်မာပြည်က အကျ (ကျသမှအဝီစိနားကပ်နေတဲ့အကျမျိုး) ဒီတော့ အသာစီးရနေတဲ့ ငွေလဲလှယ်နှုန်းနဲ့ လုပ်ငန်းတခုစဖို့ လုံလောက်တဲ့ မြန်မာငွေအရင်းအနှီး ရနေပြီ။ မြန်မာတွေကြတော့ ငွေမရှိတဲ့ကြားထဲ အဆက်အသွယ် ချို့တဲ့တယ်။ အကြွေးရောင်းပေးမဲ့ သူမရှိဘူး၊ အစိုးရက အင်တာနက်လို ဆက်သွယ်ရေးမျိုးတွေ ပိတ်ထားလို့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ တရုတ်ပြည်ထဲသွားဝယ်မှ အဆင်ပြေတယ်။ နို့မို့ရင် ပစ္စည်းဝယ်တာတောင် ရောင်းသူတရုတ်များကို ကြောက်နေရတယ်။ မြင်အောင်ပြောရရင် ရန်ကုန်မှာ တိုက်ခန်းပိုင်သူတယောက် ဘာကောင်မှ မဟုတ်ဘူး။ သို့ပေမဲ့ တိုက်ခန်းရောင်းပြီး ရလာတဲ့ သိန်းဂဏန်းနဲ့ နယ်မြို့သွားရင် သူဌေးဖြစ်တယ်။
ဒါဆို မသွားတဲ့ မြန်မာတွေ ညံ့တာပေါ့လို့ စောဒက တက်နိုင်တယ်။ မှန်သင့်သလောက် မှန်ပေမဲ့ ပြန်ချေပရရင် (၁) ဆိုရှယ်လစ် စီးပွားရေးအောက်မှာ မြန်မာတွေ ကုန်းကောက်စရာ မရှိအောင် မွဲနေတယ် (၂) စီးပွားရေးမလုပ်တတ်ဘူး (၃) ပိုဆိုးတာ ကုန်သွယ်ဖို့ အခွင့်အလမ်း မရှိဘူး။ တရုတ်တွေ ကြီးပွားတယ်ဆိုတာ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်း ပွင့်နေလို့၊ အဲဒီကနေ အခြေခံပြီး လမ်းဆက်ထွင်သွားတာ။ မြန်မာတွေ ငွေထုပ်ပိုက် နယ်ဆင်းရင် ဘာသွားဝယ် ရောင်းလုပ်မှာလဲ။ ပိုင်ရာဆိုင်ရာ အဆက်အသွယ်မရှိသူများ လုပ်နိုင်ဖို့ဖွင့်ထားတာ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးတခုပဲ ရှိတယ်။ ဖြစ်သင့်တာ အဲဒီတုန်းက အစိုးရကနေ ပေါ်လစီချပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံသားများကို မြေတောင်မြောက်ပေးရမှာ။ ဒါပေမဲ့ စစ်ဗိုလ်ကြီးများ မလုပ်တတ်ဘူး၊ စိတ်မရှည်ဘူး။ မရှည်ဆို ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေကို ပျိုးထောင်ပေးနေရင် အူစိုဖို့ အခွင့်အလမ်းနဲတယ်၊ ဒါက ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပိုင်း။
နောက်တပိုင်းက အစိုးရပေါ်လစီကိုယ်၌က တရုတ်ကို မှီနေရတာ။ သူတို့အတွက်တော့ လက်နက်ဝယ်ဖို့၊ သံတမန်ရေး အကာကွယ်ရဖို့ ထိုးကျွေးလိုက်တဲ့ နယ်ရုပ်ဖြစ်တယ်။ နောက်တချက်က အစိုးရကိုယ်တိုင်က ငွေမရှိဘူး၊ တရုတ်တွေဝင်လာမှ လိုအပ်နေတဲ့ အရင်းအနှီးရမှာ။ (ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်က ဘင်္ဂါလီကုလားတွေကျတော့ တပြားမှမပါတဲ့အပြင် ကိုယ့်ဆီကတောင် ပြန်လှီးတာမို့ အတော်ကွာတယ် ပြောရမယ်) ဒါနဲ့ပဲ တရုတ်များ ခြေကုပ်ရတယ်၊ နဂိုကထဲက စီးပွားရေးသွေးပါသူ၊ လုပ်ချင်ကိုင်ချင်စိတ် ရှိသူများမို့ တဟုန်ထိုးကြီးပွားလာတယ်။ သို့သော် ကြိုးစားတာ တခုထဲလို့တော့ လာမပြောနဲ့။ မြန်မာတွေမှာ မရှိတဲ့ အရင်းအနှီး၊ မြန်မာတွေ ရခွင့်မရှိတဲ့ အဆက်အသွယ် အခွင့်အလမ်းများနဲ့ ခုန်ပျံကျော်လွှားသွားတာ။ ရှေးတရုတ်တွေလို ဟိုးအောက်ခြေက စလာဖို့ မလိုဘူး။ အဲဒီအချက်ကပဲ လက်သစ်တရုတ်များနဲ့ လက်ဟောင်းတရုတ်များလို့ မြန်မာတွေ အမြင်မှာ ကွဲပြားသွားစေတယ်။ လက်ဟောင်းတရုတ်များအနေနဲ့လည်း အသစ်ဝင်လာသူများကို မယှဉ်နိုင် နောက်ကျကျန်ခဲ့လို့ မကျေနပ်စိတ်များ ဖြစ်စေတယ်။ လည်ဝယ်သူ လက်သစ်တရုတ်များကတော့ သူတို့သားသမီးများကို (အချို့ဆို လူပျို၊ အပျို ဖြစ်ပြီးမှရောက်တာ) လက်ဟောင်းတရုတ်များ၊ တရုတ်သွေးစပ်သူများနဲ့ နေရာချထားပေးတယ်။ သွေးနှောကြတယ် ဆိုပါစို့။ ဒီအချက်ကို ကြိုဆိုရမယ့် အချက်လို့မြင်တယ် (လက်ဟောင်းတရုတ်မလေးတွေ ဒီကောင်တွေနောက် ပါကုန်တာတော့ သိပ်ဝမ်းနဲဒယ် )။
ဩဇီဦးဖောပြောသလို မြန်မာတွေ လိုက်လို့ ပြန်ဝယ်ဖို့ မှီနိုင်ပါအုံးမလား။ အရှိန်ရနေတဲ့ ကားတစင်းကို အခုမှ ဖုတ်ဖတ်ခါထ စက်နှိုးပြီး တလိမ့်ခြင်းထွက်နေတဲ့ကား နှစ်စင်မြင်ကြည့်ပေါ့။ ရမလားလို့။ ဒါဆို ဘယ်တော့မှ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလား။ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊ သို့ပေမဲ့ ကားလဲရမယ်၊ သို့မဟုတ် အနည်းဆုံးတော့ အင်ဂျင်ချ overhaul လုပ်ရမယ်။ အီကောနောမစ်မှာ diminishing of return သီအိုရီရှိတယ်။ ဘယ်လောက် တက်နေပါစေ၊ ကြာလာရင် နေရာတခုရောက် အပြီးမှာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အစွန်းထွက်တန်ဖိုး marginal value ကျသွားရတယ်၊ အမြင့်ဆုံးအမှတ်ရောက်ပြီးရင် ပြန်ဆင်းရတယ်။ တော်သူများကတော့ အတတ်နိုင်ဆုံး ကြာကြာစံနိုင်ဖို့ အားထုတ်တယ်။ တရုတ်ကြီးရော ဘာကောင်မိုလို့လည်း၊ သူလည်း ဒီပုံစံခွက်ထဲမှာပဲ ရှိရမှာပေါ့။ မြန်မာတွေအတွက် တခေတ်ဆန်းချိန်ရောက်နေပြီဆိုရင် အဲဒီ အီကော်နောမစ်သီအိုရီအရပဲ အစပိုင်းမှာ အရှိန်နှုန်းကြီးမားစွာနဲ့ ဆုံမှတ်တခုမရောက်ခင်အထိ တက်ခွင့်ရမယ်။ နည်းမှန်လမ်းမှန်နဲ့ကြိုးစားကြရင် (အစိုးရဖက်က အခွင့်အလမ်းများ ဖော်ဆောင်ပေးဖို့၊ လမ်းကြောင်းများ ပိတ်မထားဖို့ လွန်စွာအရေးကြီးတယ်) ကြောင်ကြီး အိုမင်းမစွမ်း မဖြစ်ခင် တရုတ်မလေးပေါင်း၅၀ဝကို ဘေးတဖက်စီထားပြီး လောကစည်းစိမ်ခံစားရအုံးမယ်လို့ ကောင်းစွာယုံကြည်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေတို့လည်း ယုံကြည်လိုက်ကြစမ်းပါ။ ကျုပ်တို့ရဲ့ သမိုင်းကြွေးကို တရုတ်ရွေးပြီးဆပ်မယ်…. ယေး…….. အရေးတော်ပုံကြောင်ရမည်…။
ဒီကွန်းမန့်လေးအတွက် ကြောင်ကြီးကို မန်းသူမန်းသား စစ်စစ်ကြီးတွေနဲ့ မန်းကို ချစ်တဲ့သူတွေက လက်ခုတ်တီးပေး ကြမှာပါ။ ဆရာမကြီး TTNU ရဲ့ ကွန်းမန့်လေးက သက်သေပါဗျာ။
တော်တယ်ကွာ။ အဲဒီအတိုင်း တီချာပြောချင်နေတာ။ ပြောမတတ်လို့။
အကြိမ် တစ်သောင်း အလေးပြုတယ်ကွာ။ ဒါပဲ။
ကြည့်စမ်း ဆရာမကြီး က ကိုကြောင်ကြီးကို အလေးပြုပါသတဲ့။ ရှေ့မှာ ဝိသေသနပုဒ်ပါသေးတယ်နော်။ အကြိမ်တစ်သောင်းတဲ။
ဒီပို့စ်လေးကို ရေးတင်သော မpooch နှင့် ကွန်းမန့်ပေးသူအားလုံးကြောင့် ဒီပို့စ်လေးက အဓိပ္ပာယ်ရှိသောပို့စ်လေးတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါကြောင်း ညွှန်းချင်ပါတယ်ဗျာ။
aye.kk ရဲ့ စဉ်းစားကြည့်သော် ဆိုတာလေးက ကဗျာချစ်သူတွေအတွက် ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ပါဗျာ။
whowho ရဲ့ သူပုန်ရန်ဘေး ကင်းစေရေး ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးကတော့ ဒေါသ အကြောင်းလေး ရေးပြထားတာပါ။ ဒေါသကို သူပုန်လို့ ခိုင်းနှိုင်းပြီး သတိလေးနဲ့ ထိန်းဘို့ ရှင်းပြထားတာပါ။
အစောင့်ရှိတဲ့ခြံဟာ သူခိုး အလွယ်တကူဝင်လို့မရသလို၊ သတိရှိ နေတဲ့စိတ်ကလေးဟာ အကုသိုလ် အလွယ်တကူဖြစ်ခွင့်မရှိတာမို့ အထူးပဲ သတိလေးနဲ့ စိတ်ကလေးကို စောင့်ရှောက်နိုင်ပါစေ။
ကျေးဇူးပါ whowho ရေ။ ရွာသူားတွေလည်း ဖတ်ကြည့်သင့်သော စာတစ်ပုဒ်ပါလို့ တိုက်တွန်းပါတယ်ခင်ဗျာ။
အီးတီ ရဲ့ ရိုက်ချက်များကတော့ တရုတ်နိုင်ငံ က တရိစာ္ဆန်ရုံ တစ်ခုမှာ ရိုက်လာတဲ့ ဓါတ်ပုံ လှလှလေးတွေပါ။ အထင်ပြောတာပါ။ သူ့ပုံမှာ ဘယ်နေရာဆိုတာပါဘူးလေဗျာ။ ရွာသူားတွေ အားပေးကြဘို့ပါခင်ဗျာ။
နွေးထွေးသောမေတ္တာဖြင့် ဆိုတဲ့ ပို့စ် လေးကို မိုးစက်က တင်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။ အပျိုကြီးတစ်ယောက်ဟု ယူဆရပါသော မိုးစက်က မိဘတွေကို ကလေးတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပညာပေး ဆွေးနွေးထားတာလေးပါ။
လူတစ်ယောက်အတွက် အစောပိုင်းနှစ်ကာလများက ဘဝတစ်လျှောက်လုံးအတွက် အရေးပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်းပါ။ စာအုပ်စာပေတွေကို ချစ်မြတ်နိုးတတ်အောင် ပြုစုပျိုးထောင်ပေးနိုင်တဲ့ အချိန်ကောင်းပါ။ စာမဖတ်နိုင်သေးတဲ့ကလေးတွေကို မိဘများကစာဖတ်ပြခြင်းဖြင့်လည်း နွေးထွေးတဲ့ မိဘနှင့်သားသမီးကြား ဆက်ဆံရေးကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ကလေးများကိုစာဖတ်ပြခြင်းဖြင့် သူတို့ရဲ့နားထောင်နိုင်စွမ်း၊ အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းဖွံ့ဖြိုးလာမှုနဲ့ ဘာသာစကားတိုးတက်မှု၊ အတွေးအခေါ်တိုးတက်လာမှုစတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများအပြင် စိတ်ခံစားမှုအမျိုးမျိုးကို နားလည်လာပြီး အတွေးအခေါ်နဲ့ စိတ်ကူးတွေကိုလည်း ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိလာစေပါတယ်။ မိဘများအားလုံး မိမိတို့ရဲ့ရင်သွေးငယ်များကို နွေးထွေးသောမေတ္တာနဲ့ အောင်မြင်စွာပြုစုပျိုးထောင်နိုင်ကြပါစေ။
ပျော်စရာကွန်းမန့်လေးတွေနဲ့ ဖတ်ကြရမယ့် ပို့စ်ပါဗျာ။
ကိုနေဝန်းနီ ရဲ့ မဆုံးတဲ့ သီချင်း ၄၂ ကတော့ အခန်းဆက်အားပေးလာသူတွေအတွက် ပါခင်ဗျာ။
ကိုနေဝန်းနီ ပဲရေးတဲ့ ဘယ်ဟာကအမှန်လဲနှင့်….ကားခြင်းပြောသောစကား ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးကတော့ ဟိုင်းဝေးလမ်းတွေပေါ်က ကားတွေအချက်ပြတဲ့ ဥပဒေနဲ့ လက်တွေ့ကျင့်သုံးနေကြတာလေး လွဲနေတာလေးကို ပြောပြထားတာပါ။ ဟုတ်ပါတယ် ကိုနေဝန်းနီရေ။ အဲဒါကို ဥပဒေမှာပြောတာက မြို့ထဲမှာသုံးသလိုပဲ ညာကပ်ချင်ရင် ညာမီးကိုပြ။ ဘယ်ကပ်ချင်ရင် ဘယ်မီးကိုပြ စံနစ်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဟိုင်းဝေးလမ်းပေါ်မှာ တကယ်ကျင့်သုံးပြီး အလုပ်ဖြစ်နေကြတာက ကားမရှင်းသေးဘူး ခဏစောင့်ဆိုရင် ညာဘက်မီးကို ပြပါတယ်။ ကားရှင်းတယ် ကျော်လို့ရပြီဆိုရင် ဘယ်ဘက်မီးကိုပြပါတယ်။ အဲဒါလေးကို ကားသမားတွေဆီမှာ သူကြီးပူးလ်လုပ်သလို လုပ်ပြီး ဘယ် ဟာက အဆင်ပြေသလဲဆိုတာလေး ကို မေးမြန်းပြီး အတည်ပြုသင့်တယ်လို့ ခပ်တည်တည်နဲ့ ဝင်ပွားလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ အင်ဇာဂီ ရဲ့ ကွန်းမန့်ရှည်ကြီးတွေနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါး ဖတ်ကြည့်ကြဘို့ပါ။
သ မ္မ တ ဦး သိ န်း စိ န် အ စိုး ရ အ ဖွဲ့ လ စာ တွေ ဘ ယ် လို ယူ ထား သ လဲ ဆိုတဲ့ ပို့စ် ကို chatsu ကတင်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။ အမေးအဖြေပုံစံနဲ့ တင်လာပေမယ့် ဘယ်သူကမေးပြီး ဘယ်သူက ဖြေထားတာလဲဆိုတာ ဖေါ်ပြမထားတာကတော့ ဆိုးပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကွန်းမန့်တွေက ရှယ်တွေချည်းပဲမို့ မဖတ်မဖြစ်ဖတ်ကြရမယ့်ပို့စ်ပါလို့ ညွှန်းချင်ပါတယ်။ အခုတလော ရဲရဲတွေး ရဲရဲရေးလာသော မှော်ဆရာလေးရဲ့ကွန်းမန့်လေးကို အမှတ်တရ ဖေါ်ပြပေးပါရစေ။
မပြောရင်လဲ မဖြစ်ဘူး … ပြောရင်လဲ အနီကဒ်က ထိဦးမယ်…
ထိဟာ ပြောမယ် .. ပထမဆုံး ဘယ်နေရာမှာမှ တစ်ဒေါ်လာကို ၆ကျပ်နဲ့ မရဘူးဆိုတာ အားလုံးသိပါတယ်..။
အပေါ်မှာရေးပြထားတယ် ။ သင်္ဘောကပ္ပတိန်တစ်ယောက်က တစ်လကို ဒေါ်လာ ငါးထောင်ကျော်ရတယ်ဗျာ..။ဒါကြောင့် သမ္မတ တစ်ယောက်အနေနဲ့ သိန်းငါးဆယ်ရတယ်ဆိုတာလဲ တရားတယ် ။ ကျွန်တော် သမ္မတ ဖြစ်ရင်လဲ ဒီလောက်မှ မရရင် မလုပ်နှိုင်ဘူး..။တခြားတိုင်းပြည်နဲ့ ယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် တခြားနိုင်ငံက ကုန်ဈေးနှုန်းနဲ့ မြန်မာပြည်က ကုန်ဈေးနှုန်း ပြန်ယှဉ်ကြည့်ဖို့လဲ လိုမယ်.။မြန်မာနိုင်ငံက ကုန်ဈေးနှုန်းကတော့ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းမို့ ပြောမပြတော့ပါဘူး..။
နောက် အဆောင်အယောင်ကိစ္စ ၊ နိုင်ငံတော်မှာ အမြင့်ဆုံးတာဝန်ယူထားရသူတစ်ယောက်အဖို့ ဒီလောက်တော့ အဆောင်အယောင်ရှိရမှာပေါ့ ..။ သမ္မတဖြစ်ပြီး ှစုတ်စုတ်ပြတ်ပြတ်နေလို့ရမလား..။သူယူထားရတဲ့ တာဝန်နဲ့လျှော်ညီစွာ အဆောင်အယောင်ကလဲ ရှိကိုရှိရမှာပါပဲ..။တိုင်းပြည်အရေးကို ဦးစားပေးလုပ်နေရတဲ့သူတစ်ယောက်ဟာ မိသားစုအရေးကို ပြန်လှည့်ကြည့်စရာမလိုအောင် ဖန်တီးပေးရမှာ ဖြစ်သင့်ပါတယ်..။
တခြားမကြည့်နဲ့ဗျာ ..။ဟီလာရီလာတုန်းက ဘယ်လိုလေယဉ်နဲ့လာသလဲဆိုတာ ကြည့်ရင် ကျွန်တော်တို့သမ္မတ ဘယ်လိုအဆင့်အတန်းရှိလဲ သိသာတယ်..။သူတို့ဆီမှာ သူတို့ သမ္မတကို ဘယ်လိုထားသလဲ ..။ တခြားနိုင်ငံက ဘုရင်မသောက်တဲ့ရေကိုတောင် မတိုက်နှိုင်ဘူးဆိုပြီး ရေတောင် ယူလာတယ်မလား ..။
အူမမတောင့်တဲ့သူတစ်ယောက်က သီလ မစောင့်နှိုင်ဘူး..။ကိုယ်ကျိုးစွန့်တဲ့ခေတ် ကုန်သွားပြီ ..။အလုပ်ကိုသေချာလုပ်စေချင်ရင် လစာကိုလဲ ကောင်းကောင်းပေးရမှာပဲ ..။ဒါ အခုအစိုးရတစ်ဆက်ထဲကို ပြောတာမဟုတ်ဘူး ..။နောက် သမ္မတ တက်လာရင်လဲ ဒီလိုပဲ ပေးရမှာပဲ ..။
တကယ်တော့ အခုလိုလစာမျိုးပေးထားတာကို မဝေဖန်သင့်ဘူး..။ဒါ ရသင့် ယူသင့်တဲ့ကိစ္စလေ..။မရသင့် မယူသင့်တဲ့ လာဘ်စားတဲ့ကိစ္စမျိုးရှိရင်သာ ဝိုင်းဝေဖန်သင့်တယ် ..။
မှော်ဆရာရဲ့ကွန်းမန့်နဲ့ အတူ ပျော်စရာကွန်းမန့်တွေနဲ့ ပျော်တော်ဆက်နေပေမယ့် လိုအပ်ရင် ချက်ခြင်းကြီး အတည်အခန့် လိုင်းကို ပြောင်းနိုင်ပါသော အင်ဇာဂီ ရဲ့ကွန်းမန့်လေးကိုလည်း ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
နောက်ဆယ်သက်တော့ မပြောပါနဲ့ ကိုယ့်လူရာ …..
ကျုပ်တို့လူမျိုး အဲ့လောက် အခြေအနေ မဆိုးသေးပါဘူး…
ဗိုလ်ချုပ် ခေတ်လွန် ဦးသန့်ပေါ်ခဲ့တယ် မဟုတ်လား …
ဦးသန့် ခေတ်လွန် အမေစု ပေါ်ခဲ့တယ် မဟုတ်လား …
နှစ် ၂ဝ စီလောက်တော့ ခြားတယ်ထင်တာပဲဗျ….
သည်၃ယောက်ကိုပဲကြည့်ဗျာ ..ကွဲပြား ခြားနားတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေနော..
အရည်အချင်းကို base လုပ်သလား..ဒါမှမဟုတ် သူတို့ based ထားတာ
knowledge လား ..သတိ္တလား …..မေတ္တာတရားလား …တခုခုပေါ့ဗျာ…..
ကွယ်လွန်သွားရှာတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကို တ,နေလို့တော့ အလုပ်မဖြစ်ဘူးဗျ…..
ကျုပ်တို့ ဗမာတွေ လေးစားတယ် ကြည်ညိုတယ် သိပ်ပြောကြတယ်….
လေးစား အားကျတယ် ဆိုတဲ့ဗမာ စကားရှိပါတယ်…..
ဗိုလ်ချုပ် လို့ အော်နေတဲ့လူ အတော်များများက လေးပဲ လေးစားတဲ့အစားတွေ
တန်ခိုးရှင်တယောက်ယောက်က မင်းကို အောင်ဆန်းအဖြစ်မွေးဖွားပေးလိုက်မယ်…
မင်း ဟာ အောင်ဆန်း ရဲ့ဖြစ်စဉ်အတိုင်း တသွေမတိမ်းဖြစ်ပျက်ခံစားရမယ်…….
မင်း လက်ခံမလား ဆိုမေးလာရင် ….အနှီလေးစားပါတယ် အော်နေတဲ့လူအပေါင်းမှာ
အများစုက ဟင့်အင်း ပြောကြမှာဘဲ …
သည်တော့ ရှင်းပါတယ်ဗျာ ..လေးစားတာ လေးစားလို့ရတယ်….ကြိုက်တဲ့လူ လေးစားပစ်လိုက်
ဒါ ကိုယ်ပိုင် အခွင့်အရေးဘဲ …အဲ …အားတော့ကျလိုက်ဗျာ …
အတုခိုးကြည့်လိုက် …လိုက်လုပ် ကြည့် ကျင့်သုံးကြည့်လိုက် …ကိုယ်လေးစားတဲ့လူကို…
ကျုပ်တို့ဟာ နောက်ထပ် သခင်အောင်ဆန်းတယောက်ကို မျှော်နေရမှာမဟုတ်
ကျုပ်တို့ကိုယ်တိုင် သခင်အောင်ဆန်းကဲ့သို့ ပြုမူကျင့်ကြံရမည်ဖြစ်သည်…
ထိုတရားကို သခင်အောင်ဆန်းသည် အသက်ပေး၍ ဟောကြားတော်မူပြီးဖြစ်သည်…
weiwei ရဲ့ ကိန်းဂဏန်းများနဲ့ စကားစမြည်ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးအကြောင်းပြောချင်ပါတယ်ဗျာ။ ကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့ စာရေးသူရဲ့ ပတ်သက်မှုကို အရင်ကြည့်ရအောင်ပါ။
ကိန်းဂဏန်းများကို ကျွန်မအလွန်ကြောက်ပါသည်။ မကြားချင် မပြောချင်လောက်အောင် စိတ်ပျက်မိပါသည်။ ဘာလေးပဲဝယ်ဝယ် ဈေးမေးလိုက်တာနဲ့ ကိန်းဂဏန်းကြီးကြီးတွေ ကြားရတာ နားဝင်ဆိုးလှသည်ဟု ထင်မိလေ့ရှိပါသည်။ အစားအသောက် အဝတ်အထည် အသုံးအဆောင်ဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ် ကောင်းတာကိုမှ ကြိုက်တတ်တော့လည်း ကိန်းဂဏန်းကြီးကြီးတွေနဲ့ပဲ ထိတွေ့ဆက်ဆံဖြစ်ပါတော့သည်။
ပြီးမှ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်နှင့် သံလျင်ဘက်မှာ ခြံဝယ်ဘို့ အဖေါ်လိုက်သွားရာမှ နေ့ချင်းညချင်းတက်လာတဲ့ မြေဈေးတွေ ကြောင့် တွေးမိတဲ့ အတွေးတွေကို ဆက်ရေးပါတယ်။
ကိန်းဂဏန်းတွေက ကျွန်မဦးနှောက်နဲ့မဆံ့လောက်အောင် လျှံထွက်နေပါတယ်။ ကျွန်မစိတ်ထဲ ဘဝင်မကျတဲ့စိတ်နဲ့ တစ်ညလုံး တစ်နေ့လုံးစဉ်းစားနေမိတယ်။ ပညာတတ်ဝန်ထမ်းတစ်ယောက် တစ်နှစ်ရှာနိုင်တဲ့ဝင်ငွေက သိန်း ၂ဝ ဝန်းကျင်လောက်သာရှိပါတယ်။ ၁ဝ နှစ်မှ သိန်း ၂၀၀၊ အနှစ် ၂ဝ လုပ်ရင်တောင် သိန်း ၄၀ဝ ပဲ ရမယ်။ ဒါတောင် ရသလောက်အကုန်စုထားမှဖြစ်မှာနော်။ မြေကြီးတစ်ကွက်တောင်ဝယ်မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် မြေကြီးတွေ အကွက်အများကြီး ပိုင်ဆိုင်ထားသူ (သို့မဟုတ်) အမွေရထားသူက ဘာမှမလုပ်ပဲ တစ်ကွက်ရောင်းစားလိုက်ရင်တောင် အကြာကြီးထိုင်စားလို့ရနေတယ်။ ကံတွေက မိုးနဲ့မြေလို ကွာခြားနေတယ်။
အဲဒါကတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဘဝပေးအခြေအနေတွေ မတူလို့ ကံကြမ္မာတွေ ကွာခြားနေကြတာကို ညည်းပြောလေး ပြောသွားတာပါ။ weiwei က ဝန်ထမ်းလူတန်းစားတွေဘက်က ရင်လေးမိတာလေးကို ပြောရင်း ပို့စ်ကို အဆုံးသတ်ထားပါတယ်ဗျာ။
ဒီလိုပုံစံနဲ့သာဆိုရင် ကျွန်မတို့လို အလယ်အလတ်လူတန်းစားတွေ၊ ကာယအား၊ ဉာဏအားကိုသာ အားကိုးရသူတွေအတွက် လောကကြီးက မတရားဖြစ်နေပြီလား?
ချမ်းသာ ဆင်းရဲ လူတန်းစားကွာဟမှု ပိုများလာတော့မှာလား?
လူချမ်းသာတွေရဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေကို ကျွန်မတို့ ဘယ်လိုအမှီလိုက်ရမလဲ?
စိတ်ဓါတ်ရေးရာ မြင့်တက်လာအောင် ဘယ်လိုမျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ လုပ်ကြရမလဲ?
မေးခွန်းပေါင်းများစွာကိုတွေးမိရင်း အဆိပ်ပြင်းတဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေကြောင့် မူး … မေ့ … မျော သွားပါကြောင်း ….။
မြေဈေးဆိုလို့ တိုက်ဆိုင်တာလေးတစ်ခု ပြောပြချင်ပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မိသားစုနေခဲ့တဲ့ ရွာသာကြီးဘက်က ရွာတစ်ရွာမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်လောက်ဆီက သိန်းလေးဆယ်လောက်နဲ့ ရောင်းရင်တောင် ဝယ်မဲ့သူမရှိခဲ့ရာက အခုအချိန်မှာ ဘူတာကြီးစည်မံကိန်းကြောင့်ဆိုပြီး ငွေထုတ်ပိုက်ပြီး လိုက်ဝယ်သူတွေကြောင့် မနေ့ကပဲ အလဲဗင်း ဂျာနယ်ထဲမှာ ဈေးတွေ ဆယ်ဆလောက်တက်သွားတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းလေးပါလာပါတယ်ဗျာ။ စုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါ ဟုတ်ပါတယ်တဲ့။ တချို့ ရသလောက်လေးနဲ့ ရောင်းသွားကြသူတွေ အခုအချိန်မှာ နှမြောတသ ဖြစ်ကြရှာတယ်လို့လည်း ကြားရပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ တိုက်ဆိုင်လို့ ကိုးကားချင်တာက ညီငယ် အင်ဇာဂီရေးတဲ့ အင်ဖေါ်မေးရှင်း မန်းနေ့ချ်မန့် ဆိုတဲ့ ပို့စ်ထဲကလိုပေါ့ဗျာ။ စီမံကိန်း တွေကို ကြိုသိနေကြတဲ့ လူတန်းစားတွေ မြန်မာပြည်မှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာပါပဲ။ တစ်ပတ်လောက် ကြိုသိရင် တစ်ဘဝလုံး ထိုင်စားလို့ ရလောက်တဲ့ အမြတ်တွေပြန်ရလာနိုင်တယ်ဆိုတာ တွေးကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ အင်ဖေါ်မေးရှင်း တန်ဘိုးကြီးလာတာကို တွေ့နေရပါတယ်။ အဲဒီအင်ဖေါ်မေးရှင်းတွေကို လျှို့ဝှက်သင့်သူတွေ လျှို့ဝှက်ကြပါသလား။ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကို တိတ်တဆိတ်ကြိုအသိပေးမှုတွေရော ကင်းကြပါရဲ့လား။ ဒါလည်း အလွဲသုံးမှုထဲမှာ အကြုံးဝင်နေတာပဲ မဟုတ်ဘူးလား။ ကိုသစ်မင်းရေ အဲဒီအကြောင်းလေး လည်း ဆွေးနွေးစေချင်ပါတယ်ဗျာ။ ကွန်းမန့်ကောင်းကောင်းလေးတွေနဲ့ တွေးစရာပေးတဲ့ ပို့စ်လေးတစ်ခုပါ။ ဖတ်ကြည့်ကြဘို့ပါခင်ဗျာ။
Mg Ogga ရဲ့ ဖေ့ဘုတ်မောင်မောင် ပို့စ်လေးက ယနေ့ခေတ် အင်တာနက်ပေါ်က မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြောင်းကို သရော်ထားတာပါခင်ဗျာ။ ဖတ်လို့ အလွန်ကောင်းသော ပို့စ်လေးပါ။
သူများတွေ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဆိုလျှင် မောင်မောင်လည်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား၊ သူများတွေ ဧရာဝတီဆိုလျှင် မောင်မောင်လည်း ဧရာဝတီ၊ သူများတွေ ရိုဟင်ဂျာဆိုလျှင် မောင်မောင်လည်း ရိုဟင်ဂျာ ဖေ့ဘုတ်ပေါ်မှ မောင်မောင်၏ လှုပ်ရှားမှုများဖြစ်ပါသည်။ လူစိတ်မဝင်စားလျှင် မောင်မောင် လည်း စိတ်မဝင်စားပါ။ ပို့စ် ရဲ့ အဆုံးသတ်လေးက ပြုံးချင်စရာဗျာ။
ရိုဟင်ဂျာနဲ့ အပြိုင် မြန်မာပြည်တွင် ပခုက္ကူရေဘေး ကယားပြည်နယ် ရေဘေးများ ဖြစ်နေသော်လည်း လှုံဆော်သူ စိတ်ဝင်စားသူ ဖေ့ဘုတ်တွင်နည်းသောကြောင့် မောင်မောင် ဒီကိစ္စတွေကို မကြည့် စိတ်မဝင်စား ဖေ့ဘုတ်၏တော်လှန်သော လမ်းစဉ်အတိုင်း စိ်တ်ဝင်စားသူများတဲ့ တော့ပစ်ကိုပြောမှ ဖေ့ဘုတ်ဆယ်လီဗီတီဖြစ်မည် ဖြစ်သောကြောင့် မောင်မောင် သူများ ရိုဟင်ဂျာသလို လိုက် ဂျာ လေသည်။
တကယ်တော့ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာကို မောင်မောင် ဘာမှန်းမသိ ဘာဂျာ ကိုတော့ မောင်မောင် ကောင်းကောင်း သိသည်။ မသိလည်း ကိစ္စမရှိ ဖေ့ဘုတ်တွင် အမျိုးဘာသာသာသနာအတွက်ဆောင်ရွယ်သူတစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့ က ပိုအရေးကြီးသည်။ လူပြောများ လူထောက်ခံတာများတဲ့ တော့ပစ်တွင် မောင်မောင် မတွေဝေ မဖောက်ပြန်ပဲ တော်လှန်သောဖေ့ဘုတ်လမ်းစဉ်အတိုင်း ထိုင်ရာမှမထ တိုင်းချစ်ပြည်ချစ် ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ယောက် အဖြစ် ရပ်တည်နေသူကို ဖေ့ဘုတ်မောင်မောင်ဟုခေါ်သည်။
ကိုယ်တိုင်ရေးဆိုလျှင်ဖြင့် လက်ခုတ်တီးပေးပါသည် မောင်ဥက္ကာ ခင်ဗျား။ ကျွန်တော်တို့ ရွာသူရွာသားတွေလည်း ဖတ်ကြည့်ဘို့ တိုက်တွန်းပေးပါသည်။ ကျွန်တော်ကတော့ ကြိုက်မိပါတယ်ဗျာ။
မောင်ဥက္ကာ ရဲ့ နောက်ထပ် ကိုယ်ပိုင်အတွေးလေးကလည်းလှနေပြန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ရွာကို လမ်းမဖေါက်စေနဲ့ ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးပါ။ တိုးတက်လာတာတွေနဲ့ အတူပါလာတဲ့ ဆုတ်ယုတ်မှုတွေကို စိတ်ကုန်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ညည်းချင်းပါခင်ဗျာ။ ကွန်းမန့်လေးတွေ မြိုင်ဆိုင်စွာနဲ့ စည်ကားတဲ့ ပို့စ်တစ်ခု ဖြစ်သွားတဲ့ အပြင် မောင်ဥက္ကာရဲ့ ပို့စ်တွေဆိုရင် စောင့်ဖတ်တော့မည် ဖြစ်ပါကြောင်း ဘလက်က ဝန်ခံပါတယ်ခင်ဗျာ။ သူကြီးရဲ့ကွန်းမန့်၊ နေဝန်းနီ ရဲ့ ကွန်းမန့်၊ ဆူရဲ့ ကွန်းမန့်နဲ့ မောင်ဥက္ကာ ပြန်ဆွေးနွေးတဲ့ ကွန်းမန့်လေးတွေနဲ့ ဖတ်ကိုဖတ်ကြည့်ရမယ့် ပို့စ်တစ်ခုပါလို့ သတင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဆရာမကြီး TTNU ရဲ့ ဤခရီး အတော်နီးလှပြီ ဆိုတဲ့ သတိပေးတဲ့ ပို့စ်လေးကလည်း ကောင်းပြန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆရာမကြီးက အချိန်လေးတွေကို ဇယားလေးတစ်ခုနဲ့ ဖေါ်ပြထားပေးပါတယ်။ ပြီးမှ မေးခွန်းလေးတွေ မေးပါတယ်။
(၁) သင် …. အခု ဘယ်အရွယ်ရောက်နေပြီလဲ ?
(၂) သင် …. အခု ဘာလုပ်နေသလဲ၊ ဘာလုပ်သင့်သလဲ ?
(၃) သင် …. ဘဝ အတွက်ဘာတွေပြင်ဆင်ထားပြီးပြီလဲ ?
(၄) သင် …. ဘဝအတွက် လက်ကျန် အချိန်ကိုတန်ဖိုးရှိအောင် ဘယ်လို အသုံးချမလဲ ?
(၅) သင် …. ဘယ်နေ့၊ ဘယ်ရက်၊ ဘယ်အသက်မှာ၊ ဘယ်ရောဂါနှိပ်စက်ခံရပြီး၊
ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်ဒေသမှာ၊ ဘဝနိဂုံးချုပ်လို့၊ ဘယ်သုသာန်မှာ မြှုပ်နှံ သင်္ဂြ ိုလ်ခံရမယ်ဆိုတာ၊
မရေရာတဲ့ သင့်ဘဝအတွက် ဘဝအာမခံချက်တွေ ရရှိပြီးပြီလား ?
သင် လူ့ပြည်မှ ထွက်ခွာဖို့ အချိန်နီးလာပြီ။ တရားမမေ့ပါနှင့်။
မျှော်လင့်ထား၏ မထား၏ အသင့်ဖြစ်၏မဖြစ်၏ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ကိုပေါက်ရေးတဲ့ ပို့စ်လေးမှာ ကျွန်တော်တို့ ရွာသူရွာသားတွေ ကွန်းမန့်ပေးခဲ့ကြတာလေးတွေကို ပြန်ဖေါ်ပြပါတယ်ခင်ဗျာ။ ပြီးမှ ဆရာမကြီးက ကျွန်တော်တို့ကို စေတနာနဲ့ သတိပေးစကားလေးပြောကြားပြီး ပို့စ်ကို အဆုံးသတ်ထားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကိုယ် အ ထက်က ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အချိန်ဇယားလေးကိုနေ့တိုင်းဖတ်မိတယ်၊
ဖတ်တိုင်း အချိန်မရှိတော့ဘူးဆိုတာ စဉ်းစားမိတယ်။ စဉ်းစားမိတိုင်း ရေရာတဲ့
ဘဝဖြစ်အောင် သေရွာပါသွားမဲ့ အာမခံချက်လေးတွေ အားထုတ်မိတယ်။
ငယ်ငယ်ကြီးကြီး မိတ်ဆွေတို့လည်း အသေမဦးမီ အသိဦးစေချင်လို့
ပျော်စရာမကောင်းပေမဲ့ စေတနာကောင်းလေးနဲ့ ဒီ ပို့စ် လေးတင်လိုက်ပါတယ်နော်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာမကြီးခင်ဗျာ။ ဆရာမကြီးရဲ့ သတိပေးမှုကို ကျွန်ုပ်ဘလက်က လေးစားစွာနဲ့ ခံယူသွားပါကြောင်း ပြောပါရစေခင်ဗျာ။ ရွာသူရွာသားတွေလည်း ဒီပို့စ်လေးကို ဖတ်ပြီး သေရွာပါမယ့် အာမခံချက်လေးတွေရအောင် လုပ်ကြ ဘို့ တိုက်တွန်းပေးလိုက်ပါသည်။ ကွန်းမန့်လေးတွေဝေဝေဆာဆာနှင့် ဆရာမကြီးကလည်း တလေးတစားပြန်ဆွေးနွေး ထားတာလေး တွေနှင့် ပီတိဖြစ်စရာ ပို့စ်လေးပါခင်ဗျာ။
တရားပြဆရာလေး whowho က ဆင်းရဲခြင်းများနဲ့ မိတ်ဖွဲ့ခြင်းပို့စ်လေးနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ကို တရားပြပြန်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ ဒီပို့စ်မှာတော့ သူကြီး နဲ့ ကိုပါလေယာတို့ အပေးအယူညီညီနဲ့ ပေးသွားကြတဲ့ ကွန်းမန့်လေးတွေနဲ့ ဖတ်ကြရမယ့် ပို့စ်လေးပါခင်ဗျာ။
small cat ရဲ့ တကယ်ပူးတာလား အလေ့အကျင့်လား ဆိုတဲ့ပို့စ်ကတော့ နတ်ပူးတဲ့လူတွေကို မယုံတဲ့ အကြောင်းလေး ရေးထားတာပါဗျာ။ ကြောင်လေးက ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကတည်းကစလို့ နတ်တွေကို သံသယဖြစ်စရာလေးတွေထောက်ပြပြီး ရေးသွားတာပါ။ နတ်ယုံကြည်သူတွေ ဖတ်သင့်တဲ့ ပို့စ်ပါခင်ဗျာ။ စကားမစပ် ကိုကြောင်လေးတို့ အိမ်မှာ အိမ်တွင်းဆွဲလားဗျ။ အဲဒါလေးသိချင်တာပါ။ ယုံတာမယုံတာက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အတွေးပါဗျာ။ ကိုးကွယ်တာ မကိုးကွယ်တာက မိဘတွေလက်ထက်က ရိုးရာပါ။ တချို့ နတ်ကို မယုံကြည်သူတွေ လည်း အိမ်မှာ အိမ်တွင်းဆွဲထားတာတွေ့ဘူးပါတယ်။ သူကြီးဦးဆောင်တဲ့ ကွန်းမန့်တွေ တပြုံကြီးနဲ့ ဖတ်ထားရမယ့် ပို့စ်တစ်ခုပါဗျာ။
Mg Ogga ရဲ့ ဦးရွှေအောင်၏ ခန္ဓာငါးပါး နဲ့ Maslow’s hierarchy of needs ကတော့ ဆရာကြီးဦးရွှေအောင် နဲ့ စိတ်ပညာရှင် Maslow တို့ ရဲ့ အမြင်တွေအကြောင်းဆွေးနွေးထားတာလေးပါဗျာ။ ဘာသာရေး စိတ်ဝင်စားသူတွေနဲ့ သင့်တော်မယ့် ပို့စ်လေးပါ။
Bigchef ရဲ့ Mandalay Album ကတော့ မန္တလေးမြို့ရဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေပါဗျာ။ ပုံလေးတွေသေးနေပေမယ့် ကြည့်လို့ အဆင်ပြေတဲ့ ဓါတ်ပုံလေးများပါ။
အခုတလော လုံးဝကြီးကို ပျောက်နေသော ကိုစိန်သော့ရဲ့ ပန်းမြို့တော်က ပန်းပွဲတော်ဆီ ကတော့ ဓါတ်ပုံလှလှလေး တွေပါဗျာ။ ပြင်ဦးလွင်မြို့ရဲ့ လူကြိုက်အများဆုံးပွဲတော်တွေထဲက တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ ဓါတ်ပုံတွေလှချက်က တော့ တအားပဲဗျို့။
ကိုဖက်တီးရဲ့ ကျိုက်ထီးရိုးအမှတ်တရ ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးကတော့ ဓါတ်ပုံလေးတွေ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့ လှပခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကွန်းမန့်တွေ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့ ပျော်စရာ ပို့စ်လေးတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဗျာ။
pyiminlu ရဲ့ Thit Sa Wai Da Gu သစ္စဝေဒဂူ ရိပ်သာသို့ တစ်ခေါက် ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးကတော့ ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ တင်ပြထားတဲ့ သစ္စဝေဒဂူ ရိပ်သာ အကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ စပါးနှံပုံလေးတွေက လှချက်ကတအားပါဗျာ။ ကျေးဇူးပါ ကိုပြည်မင်းလူရေ။ တရားစခန်းဝင်ဘို့ စိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက် ၂၀၁၂ တစ်နှစ်တာ အချိန်စာရင်းလေးပါထည့်ပေး ထားတဲ့အတွက် အဆင်ပြေကြပါလိမ့်မယ် ခင်ဗျာ။
ဆူး က စင်္ကာပူရောက် မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ဦး မိုးပျံလမ်းပေါ်မှ ခုန်ချပြီး သေကြာင်းကြံပြန်ပြီ ဆိုတဲ့ သတင်းလေး တင်လာပါတယ်ဗျာ။ ဘယ်လို အကြောင်းအရာတွေကြောင့် စင်္ကာပူရောက်မြန်မာမလေးတွေ သတ်သေချင်စိတ်တွေ ပေါက်နေရတာလဲဆိုတာ အဖြေရှာသင့်ပါပြီခင်ဗျာ။ သတင်းအရ ကောင်မလေးက မသေသေးဘူးဆိုလို့ ပို စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပါတယ်။ ဆရာမကြီး TTNU ရဲ့ ကွန်းမန့်လေး ဖေါ်ပြချင်ပါတယ်။
ကိုနေဝန်းနီ တင်ထားသလိုပါပဲ။ ဤ ခရီး တော်နီးလှပေမဲ့ ဝဋ်ကြွေးမကင်းရှာသူ ကလေးမ
မသေဘဲ ကျန်နေပါပေါ့လား။ နေလည်းကြွေ သေလည်းကြွေတဲ့ ဘဝလေးများဖြစ်နေရော့လားကွယ်။
အသက်ရှင်မနေချင်လောက်အောင် ဘဝက ဘယ်လောက်များ ကြမ်းသွားတာပါလိမ့်။သနားမိပါတယ်။
ကွန်းမန့်တွေ အများကြီးနဲ့ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးချက်တွေနဲ့ ဖတ်ကြရမယ့် ပို့စ်လေးပါဗျာ။
ကိုနေဝန်းနီရဲ့ နားမလည်လိုက်တဲ့ … သင်ခန်းစာ ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးကို တစ်ခါတည်းဖတ်လို့ ရအောင်စီစဉ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
manawphyulay က မိဘမဲ့ကလေးများကို နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုရအောင် ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးတင်လာပါတယ်။ ခဝဲခြံနားမှာ ရှိတဲ့ ကုမာရာရာမ ပရဟိတ စာသင်တိုက်က မိဘမဲ့ကလေးတွေ အကြောင်းလေးရေးထားပေးတာပါ။ သူတို့ မှာ လိုအပ်ချက်တွေလည်း ရှိနေပါတယ်တဲ့။ လှူချင်တဲ့သူများ ရှိရင် လှူနိုင်ကြအောင် လိပ်စာလေးထည့်ပေးထားပါတယ်ဗျာ။ ပရဟိတသာမဏေများအတွက် ပစ္စည်းများလည်း လှူဒါန်းနိုင်သလို မိဘမဲ့ကလေးများအတွက်လည်း ကုသိုလ်ယူနိုင်ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ နေရာများအတွက် ကျောင်းသားသုံးပစ္စည်းများအပြင် သာမဏေများအတွက်လည်း သင်္ကန်းတို့ဘာတို့လည်း လှူဒါန်းလို့ရပါတယ်။ ကဲ အလှူဒါန ပြုချင်ကြသူများ မနောဖြူလေးရဲ့ ပို့စ်ကိုဖတ်ပြီး လှူနိုင်ကြပါပြီခင်ဗျာ။
kotun winlatt ရဲ့ စုန်းစာ ဆိုတာလေးကတော့ ဝတ္ထုတိုလေးတစ်ပုဒ်ပါဗျာ။ အချိန်ကိုငဲ့သောအားဖြင့် ဇာတ်လမ်းကို အသေးစိတ်ပြန်ပြောမနေတော့ပါဘူး။ သူ့မိန်းမကို စုန်းမလို့ စွတ်စွဲခံရတဲ့ ဘမှိုင်းရဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ ဖတ်လို့ကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပါဗျာ။
ကိုနေဝန်းနီ ရဲ့ ရာသီပေါ်မှာ အိပ်စက်ခြင်းကလည်း ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ပါဗျာ။
manawphyulay ရဲ့ လကြတ်ပြီး ဆေးပေါင်းခတဲ့ည ကတော့ နောက်ကျပြီးရောက်လာပါသော လကြတ်ပုံလေးများ ပါခင်ဗျာ။
Big Bang က Dream 16 ခေတ်မီသေးတယ်မို့လား ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးတင်လာပါတယ်။ ကောသလအိပ်မက် ၁၆ ချက်အကြေင်း ပန်းချီဆွဲထားတာလေးကို ဓါတ်ပုံရိုက်တင်ထားတယ်လို့ ထင်ပါတယ်ဗျာ။
M-Lulin က ရန်ကုန်အတွင်း ညရှုခင်း ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဓါတ်ပုံလှလှလေးတွေတင်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဘယ်လောက်လှလဲဆိုရင် သူကြီးကတောင် ဒီလိုကွန်းမန့်ရေးတဲ့ အထိပါ။
ရွာထဲမလည်း…. ဓါတ်ပုံဆြာတွေများလာတာ.. တန်ဖိုးတက်လာပါတယ်..။
အားလုံး.. ငွေကြေးအရ.. အကျိုးရှိအောင်.. တခုခုလုပ်မယ်စဉ်းစားကြည့်ပါတယ်..။
အဲဒီလို ဝက်ဆိုက်လွှင့်တင်ပြီး… ရောင်းပေးလို့ ဖြစ်နိုင်မလားဗျ..။ ကျုပ်က… ငွေအပေးအယူတာဝန်ယူပေးနိုင်ပါတယ်..။
ကဲ ရွာထဲက ဓါတ်ပုံဆရာတွေအတွက် သူကြီးရဲ့ အစီအစဉ်လေးက အားတက်စရာပါဗျာ။ လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ကြရင် ကောင်းပါတယ် ဗျို့။
ကျွန်တော်တို့ သူကြီးက ပြေဆေး ၂ ရဲ့ လက်ရာ ဟင်္သာကိုးသောင်းဇာတ်ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုလေးတင်လာပါတယ်ဗျာ။ စာကောင်းပေမွန်ဖတ်စေချင်တဲ့ အတွက် စာရေးသူထံခွင့်ပြုချက်တောင်းပြီး တင်ထားတာပါတဲ့။ ဖတ်ကြည့်ကြပါခင်ဗျာ။
ကိုစိန်သော့ကြီး က ရှုမဆုံးတော့ ပြီ ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ PANORAMA PHOTOS အကြောင်းလေးရှင်းပြပြီး နမူနာဓါတ်ပုံလေးတွေလည်း တင်လာပါတယ်ဗျာ။ လှချက်တော့ တအားပါပဲ။ ဒါနဲ့ ဒီလူကြီး ခုတလော လုံးဝကို ပျောက်နေတယ်ဗျာ။ အေးလေ ကျွန်တော်တို့တွေကလည်း လာတဲ့အခါပဲ တွေ့ရတာပါ။ ပြန်လာရင်တော့ ရိုက်ချက်အသစ်အဆန်းတွေ ပါလာဦးမှာ မြင်ယောင်တယ်ဗျို့။
ကိုဖက်တီးက HIV ကူးနိုင်ပါသလား ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးတင်ပြီး အောက်မှာပါတဲ့အတိုင်း မေးလာပါတယ်ဗျာ။
ကျနော့အိမ်နီးနားချင်းတဦးဟာ မျက်စိရှေ့မှာတင်ဘဲ နေမကောင်းဖြစ်ပြီး ချက်ချင်းပိန်ကျသွားပါတယ်။
ပထမတော့ TB ဖြစ်တယ်လို့ပြောသေးတယ်။
ကျနော်ကတော့ရိတ်မိလိုက်ပြီ ဒီလူ HIV ဘဲနေမှာဆိုပြီး …။
နယ်မှာလို မစပ်စုကြဘူးလေ သွားလဲမမေးကြပါဘူး။
အဲဒီလူက သက်သာလာရင် အပြင်ပြန်ထွက်လာတယ်။
ရောဂါပြန်ထလာရင် အိမ်ထဲကမထွက်ပြန်ဘူး …။
ခေါက်ဆွဲတွေဘာတွေ ဝင်လုပ်နေပြီ .. အဲဒါ ကူးစက်တတ်ပါသလားလို့သိချင်ပါတယ်။
နားလည်သူများဖြေပေးစေချင်ပါတယ် .. အများကိုရောင်းနေတာမို့ပါ …။
ဗဟုသုတရစရာကွန်းမန့်တွေနဲ့ ဖတ်ရမယ့် ပို့စ်ပါခင်ဗျာ။
whowho က ကြာပန်းလေးများခေါ်ရာနောက်သို့ ၂ အမည်နဲ့ ပို့စ်တင်ပြီး တရားပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ အသေးစိတ်ကို ရေးမပြတော့ပါဘူးခင်ဗျာ။ တရားလိုချင်သူတွေ ဖတ်ကြည့်ကြပါလို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။
kotun winlatt လက်ရာကောင်းလေး တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဒေးဗစ်ချန်း ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးအကြောင်းပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ရင်နင့်စရာ ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ကို လက်ရာကောင်းကောင်းနဲ့ ရေးဖွဲ့ထားလို့ ဖတ်ရတာတော်တော် အဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ဖတ်ကြည့်ပြီး ရသတစ်ခုကို ခံစားကြည့်ဘို့ ညွှန်းပါရစေခင်ဗျာ။
မောင်သန်းထွဋ်ဦးလေးက စာခိုးကူးချနေတဲ့ ဆရာအသစ်တွေ ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးတင်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။ သံတွဲမြို့အထက ၁ မှာ ဘီအီးဒီဝင်ခွင့်ဖြေဆိုနေတဲ့ ကျောင်းသားတွေ စာခိုးချနေကြတဲ့ အကြောင်းလေးပါ။ ရင်လေးစရာကောင်းလှပါတယ်ဗျာ။ စာခိုးချတဲ့ အကျင့်ကြီးကို campaign တစ်ခုလိုလုပ်ပြီး တိုက်ဖျက်မှ ရလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်က ထင်မြင်မိကြောင်းပါ။
htoosan က အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီတံဆိပ်နှင့် သင်္ကေတ ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးတင်လာပါတယ်ဗျာ။ NLD ကသတင်းစာမှာ ကြော်ငြာသော ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုတင်ပြမည် အဖွဲ့ အမှတ်တံဆိပ်ပုံလေး ကို တင်ပေးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဂေဇက်တံခါးစောင့်ကြီး ၏ ရောသမမွှေ ထူးရှယ် ဂိုက် ကို ဖတ်ရှူပြီးသကာလ ၊ သေချာမဖတ်ဖြစ်ခဲ့သော စာ များ ကျန်နေခဲ့သေးသည် ကို သတိထားမိလိုက်သည် ။ ပြန်လည် ဖတ်ရပါဦးမည် ။
လှပသော ပစ်ချက် အတွက် ကိုဘလက်ရေ အလွန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ.။
အိုင် ဗဲဒီးဗဲဒီးကြိုက်…ဒီလိုပို ့စ်
အို ့ရက်စ်..အို ့ရက်စ်..
ကိုဘလက်ကို အနေခက်အောင် ချွန်တွန်းလုပ်တယ်လို့ မထင်ပါနဲ့။ (အယ်ဒီတာ့ ထံ ပေးစာ (လချုပ် ၊ နှစ်ချုပ် အကောင်းဆုံး ပိုစ့်များ ရွေးချယ် ချီးမြင့်ပေးရန် တင်ပြခြင်း) ပိုစ့်မှ အဆက်…
အခုလို သူမတူတဲ့ အားစိုက်မှုတွေနဲ့ ဂေဇက်ကို အလှဆင်နို်င်တာမို့…..
အခုရက်ပိုင်းမအားတာနဲ့အတော်ပဲ နောက်မှ အသေးစိတ်ဖတ်ပြီး ပြန်ရှာရမယ်
ခုမှပဲ ကိုယ်မဖတ်ရသေးတာတွေ တော်တော်များများ သတိပြုမိတော့တယ်။ ကွန်ကောင်းတဲ့အချိန်လေး ပြေးဖတ်လိုက်ဦးမယ် တံခါးစောင့်ကြီးရေ… သိုင်းကျူး(Rဇာနည်လေသံဖြင့်) ပါ….
ကျေးကျေးဘဘ ဘလက်ရေ့ ..လွတ်သွားတာလေးတွေ ရှာဖတ်ဖို့
ဦးဘလက် ခင်ဗျာ……ကြောင်လေးအိမ်မှာ အိမ်တွင်းမဆွဲပါခင်ဗျာ၊ ရိုးရာနတ်လည်းမရှိပါ၊
အိမ်တွင်းနှင့်ရိုးရာမတူဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ရိုးရာဆိုတာက မိဘ ဘိုးဘွားစဉ်ဆက်ကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့နတ်လို့သိထားပါတယ်။ ကျနော့်အမေရဲ့ ရိုးရာက ပြေလယ်ပြင် မောင်နှမ ဆိုလားပဲ။ အိမ်တွင်း မင်းမဟာဂီရိ ဆိုတဲ့ ပန်းပဲ မောင်တင့်တယ်အကြောင်း “မင်းမဟာဂီရိ ဘယ်မှာရှိ” ဆိုပြီး ရီစရာ ပို့တစ်ခုကျနော် ရေးထားပါတယ်။
ကျနော့ အမေ ရဲ့ ရိုးရာနတ်ကိုကော၊ အိမ်တွင်းဆွဲ တဲ့ အလေ့အထကိုပါ ကျနော့်အဖေ လက်ထက်ကတည်းက အပြီးသတ်ဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ အကြောင်းလေး ပို့တစ်ခု ရေးပါဦးမယ်။ ကံကောင်းတာက ကျနော်မိန်းမ ရတော့ မိန်းမဘက်ကဘည်း ဘာနတ်မှ ပါမလာခဲ့ပါဘူး။အဲဒါကြောင့် ကျနော့်အိမ်မှာ ဘုရားစင်ကလွဲရင် ဘိုးဘိုးအောင်၊ ဘိုးမင်းခေါင်ပုံတွေ တောင်မရှိပါဘူး။သူတို့တွေ မရှိဘူးလို့မဆိုလိုပါ၊ ကျနော်က ကိုးကွယ်ရာအဖြစ်မထားခြင်း ကိုသာဆိုလိုတာပါ၊ အခြားသူများ ကိုးကွယ်ခြင်း(ပူဇော်ပသခြင်း) ကိုလည်းအပစ်ဆိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ စဉ်းစားကြဖို့သာတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကိုဘလက်ရဲ့ အားထုတ်မှုအတွက် အထူး ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ ခုလိုပို့စ်တွေအတွက် ရင်းနှီးရမယ့် အချိန် တွေကလည်း မနည်းလှဘူးဆိုတာ သိသာပြီးသားမို့ နောက်ထပ်ပို့စ်တွေရေးနိုင်စေဖို့ ကိုဘလက်တစ်ယောက် အချိန်သူဌေးကြီးဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ကျနော့်ပို့စ်တွေပါ ထည့်ရေးပေးလို့ အထူး အားနာမိပါကြောင်း။
အော် သဂျီးလည်း ကြွားချင်ရှာတာပဲ
အဲ့ဒါ သည်ရက်ပိုင်း ဘာသာရေးပိုစ့် သိပ်မတက်လို့
အနီကတ် အထိနည်းသွားလို့ ဖြစ်မယ်ဗျ…
သူကြီးမင်း ရာထူးပြန်မကျဘို့ ဆုတောင်းပါကြောင်း
သူကြီး တစ်ပွင့်ဘဲ တွေ့တော့တယ်။ အများနဲ့ တန်းတူဖြစ်အောင် တမင် ပြန်ညှိ ထားတာလား။ ;-)
မရောက်တာကြာတဲ့ ဂေဇက်ကို ရောက်ရောက်ချင်း တံခါးမှုးကြီးစာကိုတွေ့ရလို့ အရမ်းဝမ်းသာမိပါတယ်။ ဒီပို့စ်ကိုအရင်ဆုံးဖတ်ပြီး ကိုယ်စိတ်ဝင်စားနိုင်မဲ့ ပို့စ်တွေကို လွယ်လွယ်သိနိုင်လို့ အရမ်းကိုကျေးဇူးတင်ပါရှင်……….
ရွာသူ/သားများ အားလုံးပဲ မင်္ဂလာညချမ်းပါ ^_^
ကျနော်ကတော့ ကိုချော ရေးတဲ့ထဲကဟာကို အရင်ဆုံးဖတ်မယ်ဗျာ။
ငယ်ငယ်တုန်းကအမေချက်ပြုတ်ထားရင် စိတ်ကြိုက်လက်တင်ခူးခတ်ပြီးသား စားရတဲ့
အမေဘယ်အချိန် ဈေးသွားတာလဲ၊ ဈေးခြင်းတောင်းနိုင်ရဲ ့လား၊ အမေထမင်းဟင်းတွေ
ချက်ရတာညောင်းနေပြီလား၊ (တော်တော်ငယ်တုန်းက) မတွေးခဲ့ကြပါ။
စားသောက်ပြီးရင် စားကောင်းလွန်းလို့ မီးဖိုချောင်မှာ အမေသာရှိရင် ပဒေသာပင်တောင်
အဲဒီလိုပါပဲ။ ကိုဘလက်စီမံရေးသားထားတဲ့ အနှစ်သာရလေးတွေ
ကိုဘလက် ပို့စ်တိုင်းကို အသေအချုာဖတ်ရတာ အိပ်ပျက်နေမှာလား။ဇက်ကြောလေးတွေ
တက်နေမှာလား၊ (တော်တော် ကြီးတဲ့တီချာတောင်မှ)မတွေးခဲ့ကြပါ။
ကိုဘလက်တံခါးစောင့်ကြီးလုပ်ပြီးရေးထားသမျှ ဆတ်ကောင်းလွန်းလို့ ဂဇက်ရွာမှာ
ဘလက်သာရှိရင် Sky Net တောင် မှ တပ်ဆင်စရာ၊
အဲသဟာကြောင့် အခု တီချာပေးတဲ့ ရူပက အလင်္ကာလေးကို လက်ခံပါရှင့်။
ခုလို အနှစ်ချုပ်ရေးရတာ အချိန်ရော ငွေရော လူရော အပင်ပန်း ခံရရုံသာ မက ဝါသနာရော ဇွဲရော စေတနာရော ပါမှ သာ လုပ်နိုင်တာမျိုးပါ
သေချာတာကတော့ ကိုဘလက် လုပ်သလို ဘယ်သူမှ မလုပ်နိုင် မဖတ်နိုင်ကြပါဘူး ဆိုတာလေးပါ…….
တံခါးစောင့် ကြီးရေ – ကျွန်မ Post ပါ Comment ကို ပါထည့်ပြီး ဆွေးနွေး ပေးထားလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒီ လို အနှစ်ချုပ် မှာ တစ်ချို့ ကျော်သွားမိတဲ့ Post တွေကိုပါ ဖတ်နိုင်လို့ စာဖတ်သူတွေ အတွက် အလွန်အကျိုးရှိပါတယ်။ အဲဒီ အတွက်က တော့ အထူး အထူး ဘဲ ကျေးဇူးပါ။
ကျနော်က တံခါးစောင့် ဦးဘလက်ညွှန်တဲ့ ပိုစ့်လေးတွေကို အရင်ဖတ်ပြီးမှ ကျန်တာလေးတွေ ဖတ်ဖြစ်တဲ့လူဆိုတော့ အခုလို ကျနော့်ပို့စ်လေးနဲ့ ကွန်းမန့်လေးကို ဖော်ပြတဲ့အတွက် ဦးဘလက်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပါရစေဗျာ……………..
အဝါရောင်ကြယ်နှစ်ပွင့် ပိုင်ရှင် ကြီး သူကြီးပါခင်ဗျာ။
အခုတော့ တစ်ပွင့်ပြုတ်နေပြီ ကိုဘလက်ရေ။ :-)
အကိုကတော့ ဂေးဇက် “မာတိကာ”ကြီးဖြစ်နေပြီလေ
စာအုပ်ဖတ်ရင် မာတိကာ မဖတ်တတ်တဲ့ကျွန်တော်တော့
အခု ကိုဘလက်ရဲ့ ““မာတိကာ”” ကိုဖတ်တတ်နေပြီဗျ..
သဂျီးဆီမှ ပွိုင့်ကြိုထုတ်ပြီး မာဆပ်လိုက်ပို့ပေးပါ့မယ်.. အဟီးး
သဂျီးက ကြယ်နှစ်ပွင့်ရထားတော့ အားကျမခံ
ကိုရင်လည်း ကြယ်ငါးပွင့်နဲ့ လိုက်ပါတော့မယ်.. ခွစ်ခွစ်..
ပိုက်ပိုက်မရတဲ့ တံခါးစောင့်ကြီး ရေးထားတာတွေ ကိုလေးစားစိတ်နဲ့ သေချာ ဝင်ဖတ်သွားပါတယ်ဗျာ..
ကိုဘလက်ချောကြီး စေတနာ နဲ့ အပင်ပန်းခံမှုကတော့ ကြာလေ ကြာလေ
လေးစားမိလေပါပဲ ၊ ကိုဘလက်ဘဝ က ရေထဲ ရောက်နေတဲ့လူလို ဖြစ်နေပြီး အချိန်တိုင်း လှုပ်နေဘို့ လုပ်နေရလို့လေ ၊ တစ်ခါတစ်လေလောက်ပဲ ကိုဖော့ရင်း ခဏနားခွင့်ရမှာ ၊ ဘယ်သူမှ ခိုင်းတာတော့ မဟုတ် ကိုယ့်အသိနဲ့ ကိုယ်လုပ်တာမို့ ပျက်ကွက်လို့ မရဘူး ဖြစ်နေတယ်
တံခါးစောင့်ကြီး။ ခုမှဂေဇက်ရွာထဲရောက်လာတဲ့ ရွာသူအသစ်မို့ နားမလည်သေးတာတွေအများကြီးပါ။ ရွာသူရွာသားတချို့ကိုတော့ သိနေတာ ကြာပါပြီ။ ကူညီကြပါဦးနော်။
၅ – ၁ – ၂၀၁၂ မှာ အပိုင်း ၅ တင်နိုင်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
တံခါးစောင့်ကြီး ဘလက်က ဖတ်ဘူးတဲ့ ကဗျာလေးနဲ့ အားလုံးကို
တချို့က ကိုယ့်ကို အမုန်းပန်းလေးတွေ ပေးကြတယ်။
ကိုယ်က အဲဒီပန်းကလေးတွေကို မြစ်ကလေးတစ်ခုမှာ မျှောပစ်လိုက်တယ်။
မြစ်ကလေးရဲ့ အမည်က ခွင့်လွှတ်ခြင်း တဲ့။
ဘလက်ကို ချစ်ခင်ကြတယ် ဆိုရင် ဝမ်းသာပါတယ်။
ဘလက်ကို သောက်မြင်ကတ်တယ်ဆိုရင် အင်း….လွမ်းပါတယ်ဗျာ။
စာဖတ်လျှင် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဖတ်တတ်သူ မောင်ပေ အား
ဘယ်နေရာ မှာ ဘယ်လို
ဟိုနေရာ မှာ ဟို
ဘရာသာ ဘလက် အား
လေးစား ကျေးဇူး တင်ရှိပါကြောင်း
ကွန်မင့် ပါသည် ။
ကိုဘလက်ရော ကိုသစ်မင်းကိုရော တူးပြီးကြောင်း သတင်းပေးပို့အပ်ပါသည်။
တံခါးစောင့်လို့ တွေ့လိုက်တော့ နောက်က 12 ကိုမမြင်မိပဲ ထိတ်ခနဲ ဝမ်းသာသွားမိတယ်။
တံခါးစောင့် ပို့စ်တွေ ပြန်ဖတ်ရတော့မှာလားလို့။
ခုတော့…… မယ်ခွစ်နဲ့ မယ်ဆွိ လျော်ပေးကွာ။
အလျော်ကတော့ ကိုဘလက်၊ကိုသစ်၊မယ်ပုနဲ့ မောင်ဂီကို ပြန်ခေါ်လာပေး။
ဂီ ကို မနက်ကမှ ခေါ်ထားတယ်။
ကိုဘလက်ကတော့ ဒီလိုပို့(စ) တွေမရေးတော့ဘူးလားမသိ။
ကိုသစ်မင်းတော့ အဆက်အသွယ်မရှိလို့ မခေါ်နိုင်။
မယ်ပု က ခရီးတွေ အဆက်မပြတ်သွားနေတယ်။
တမင် တကာ မေ့ထားတဲ့
အတိတ်က အ ကြောင်းကို ဆွ ပေးလိုက် သလိုပါ ပဲဗျာ။
သခင့် ဆီ အ ပြေး ပြန် လာမည်
လို့ပဲ ပြောခဲ့ပါရ စေ ကွယ်။
တံခါး​စောင်​့ ကြီးကို ဘယ်​သူက တာဝန်​ရပ်​စဲ လိုက်​သလဲ ​ခေတ်​​တွေ စနစ်​​တွေ ​ပြောင်​းလာပြီမို့ ( အဲ့ဒိလို ​တော့ ​ပြော​နေကြတာပဲ တစ်​ကယ်​​ပြောင်​းမ​ပြောင်​း​တော့ ​ကျော်​လဲ မသိ ) ယခင်​ အလုပ်​​ဟောင်​း လုပ်​လက်​စ လက်​စ လက်​န လည်​း ရှိ ဖူးသူကို ရွာတံခါး အဲ့ မြို့ တံခါး ပြန်​​စောင်​့ဖို့ ဖိတ်​​ခေါ်ပါတယ်​ ။